Ungaselapha kanjani isifo sikashukela ngeHumulin NPH? > Ukwelashwa nokuvimbela
Ukumiswa komjovo (ngokunqenqema noma ngokuxhunywa ngaphakathi) kuqukethe i-insulin esetshenziselwa umuntu kabusha ngethamo lika-40 noma 100 IU / ml, kutholakala ngo-10 ml vials noma ngo-1.5 no-3 ml cartridgeges we-syringe pens.
Isenzo sokwelapha: ukuqala - imizuzu engama-30 ngemuva kokuphatha, esiphezulu - phakathi kwamahora 1 no-3, ubude besikhathi esivela emahoreni angama-5 kuye kwayi-7.
Ezinye izidakamizwa zinokwakheka okuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe.
Isibonelo, iHumulin MZ ingxube yama-insulin amabili: i-insulin yabantu i-insulin (30%) nokumiswa kwe-isofan-protamine insulin (70%). Igama eligcwele yi-insulin biphasic (ubunjiniyela bezakhi zofuzo).
I-Biphasicity ingenxa yobungqayizivele besenzo somuthi: umphumela wokuqala unqunywa ngesenzo se-insulin esetshenziswe isikhathi esifushane, okuyingxenye yaso, khona-ke isenzo sokuqina kwe-insulin siyabonakala.
Ukukhishwa kwesenzo ngemuva kwemizuzu engama-30, umphumela omkhulu ngemuva kwamahora angama-2-8, ubude besikhathi sokusebenza kuze kube ngamahora angama-24.
Zonke izidakamizwa zaleli qembu emakhemisi zethulwe ngendlela yama-ampoules noma ama-vials anamafomu uketshezi, umthamo ngesimo sethebhulethi akwenzekiAwukwazi ukubaphuza. Kuyadingeka futhi ukuthola umuthi umuthi. Isichasiselo sinamathiselwe kulo muthi, oqukethe incazelo kanye nemithamo yemithamo yemithamo, kodwa ngaphambi kokusebenzisa kuyadingeka ukubonana nochwepheshe.
Ama-humulin aphathwa ngokudlula emgodini we-emathunjini (ngokunqenqema noma ngokuhlangana). Ngokwemithetho, isiguli kufanele senze izifundo, ngokwesibonelo, "ezikoleni zikashukela." Mangaki amayunithi ngosuku okwamukelwa isiguli ekuqaleni anqunywa ngudokotela.
Umthamo wesidakamizwa, okhethwe ngudokotela, ungahluka ngokuya ngemodi yokusebenza komzimba kanye nokudla okuphansi kokuphathwa kwamazinga we-glycemia yisiguli (kodwa esiqeqeshiwe).
Kunconywa ukusebenzisa izidakamizwa ezinqunyelwe ngokuqinile njalo. Umuthi usetshenziswa ngempumelelo efanayo, kungakhathalekile ukuthi isiguli yindoda noma ngowesifazane.
Ezinganeni, lo muthi uvunyelwe ukusetshenziswa. Ukusetshenziswa kufanele futhi kulawulwe yi-glycemia. Ngaphezu kwalokho, uma iminyaka yobudala ivuma, izingane kufanele zifunde imithetho yokuphila nesifo sikashukela.
Ezigulini esezikhulile, ukuqapha ngokucophelela ukusebenza kwezinso kuyadingeka, futhi imithamo emincane yesidakamizwa isetshenziswa kaningi.
Ngesikhathi sokukhulelwa, izidakamizwa zivunyelwe ukusetshenziswa.
I-Humulin ingasetshenziselwa ukuncelisa ibele, uma i-lactation igcinwa.
I-Humulin ingaholela ku-lipodystrophy (endaweni yomjovo), ukumelana ne-insulin, ukusabela komzimba, ukwehla kwamazinga e-potassium, kanye nokukhubazeka okubukwayo okwejwayelekile. Imiphumela emibi (i-allergies) ingabangelwa yi-insulin uqobo, kepha ngabatholwa ngomuthi, Ngakho-ke, ukufaka omunye umuthi we-insulin kuvunyelwe.
Ukuqokwa kwe-humulin kudinga hlukanisa ukunakwa ngokusetshenziswa kanye kanye nezidakamizwa ezilandelayo:
Ngcono umphumela we-hypoglycemic:
Amalungiselelo aqukethe i-Ethanol
Yehlisa umphumela we-hypoglycemic:
Ukuvimbela inzalo ngomlomo
Ukunquma le mithi kungenzeka, kepha ukulungiswa komthamo kuyadingeka. Imvamisa kuyadingeka ukusebenzisa ama-humulin kanye ne-antibiotic kanye nezifo ezihlangene.
I-overdose of humulins ihambisana ne-hypoglycemia, iyingozi ikakhulukazi uma ukudla, ukwephulwa kwendlela yokujova, kanye nokuzivocavoca komzimba kungabhekwa. Umlutha ngokuya ngezifundo zesayensi awuzange uphawulwe.
Izinkinga zikhemisi kusekelwe iresiphi.
U-Lantus noLevemir - i-insulin esebenza ngokungeziwe
ILantus neLevemir yizinhlobo zesimanje ze-insulin esebenza isikhathi eside, ifakwa emahoreni ayi-12- 24 ngohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2. I-insulin esezingeni eliphakathi ebizwa nge- protafan noma i-NPH nayo isasetshenziswa. Umjovo walesi insulin uhlala cishe amahora angama-8. Ngemuva kokufunda i-athikili, uzofunda ukuthi zonke lezi zinhlobo ze-insulin zihluke kanjani komunye nomunye, ukuthi iyiphi engcono, kungani udinga ukuzijova.
Isenzo sikaLantus, Levemir noProtaphane. Izici zazo ngazinye zalezi zinhlobo ze-insulin.
Izinhlobo zokwelapha ze-T1DM ne-T2DM nge-insulin ende futhi esheshayo.
Ukubalwa komthamo kaLantus noLevemir ebusuku: imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo.
Ukuyifaka kanjani insulin ukuze ushukela ekuseni esiswini esingenalutho kwakuyinto evamile.
Ukushintshwa kusuka ku-protafan kuya kwe-insulin yesikhathi esizayo.
Yikuphi i-insulin okungcono - uLantus noma uLevemir.
Ungayikhetha kanjani isilinganiso se-insulin esandisiwe.
Ukudla ukunciphisa imithamo ye-insulin ngezikhathi ezi-2-7 futhi kuqedwe ushukela wegazi.
Siphinde futhi sinikeze inqubo eningilizayo futhi ephumelelayo yokufeza amazinga ajwayelekile kashukela egazini esiswini esingenalutho.
Iziguli ezinesifo sikashukela kufanele zinikezwe i-insulin eyengeziwe ebusuku kanye / noma ekuseni, kungakhathalekile ukuthi isiguli sithola imijovo ye-insulin ngokushesha ngaphambi kokudla. Abanye abanesifo sikashukela badinga kuphela ukwelashwa nge-insulin eyeluliwe. Abanye abayidingi i-insulin eyengeziwe, kepha bajova i-insulin emfushane noma ye-Ultra-iDemo ukuze uqede ukukhipha igazi ngemuva kokudla. Futhi abanye badinga bobabili ukuze balondoloze ushukela ojwayelekile, ngaphandle kwalokho izinkinga zesifo sikashukela zizoba khona.
Ukukhetha izinhlobo ze-insulin, imithamo nohlelo lomjovo kumuntu onesifo sikashukela uqobo kubizwa ngokuthi “dweba i-insulin therapy regimen”. Lesi sikimu sihlanganiswa ngokusho kwemiphumela yokulawulwa ngokuphelele koshukela egazini emasontweni angama-1-3. Okokuqala, udinga ukuthola ukuthi ushukela wegazi esigulini uziphatha kanjani ngezikhathi ezahlukahlukene zosuku ngokumelene nesizinda sokudla okuphansi kwe-carbohydrate. Ngemuva kwalokho, kuba sobala ukuthi uluhlobo luni lokwelashwa kwe-insulin aludingayo. Funda isihloko esithi “Uhlobo luni lwe-insulin okufanele ulujove ngayo, ngasikhathi sini nokuthi udonsa ini. Izikimu zesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela. ”
I-insulin eyengeziwe kungenzeka ingadingeki, kodwa imijovo ye-insulin esheshayo iyadingeka ngaphambi kokudla. Noma okuphambene nalokho - udinga i-insulin eyengeziwe ebusuku, futhi usuku ngemuva kokudla ushukela kuyinto evamile. Noma isiguli sikashukela sizothola esinye isimo somuntu. Isiphetho: uma i-endocrinologist ichaza ukwelashwa okufanayo kuzo zonke iziguli zayo ezinomthamo we-insulin futhi ingabheki imiphumela yokulinganisa kwabo ushukela wegazi, ngakho-ke kungcono ukubonana nodokotela omunye.
Kungani ngidinga i-insulin esebenza isikhathi eside?
I-insulin esebenza isikhathi eside iLantus, Levemir noma iProtafan iyadingeka ukugcina ushukela ojwayelekile wokuzila. Inani elincane le-insulin lijikeleza egazini lomuntu ngaso sonke isikhathi. Lokhu kubizwa ngokuthi isizinda (isisekelo) se-insulin. Ama-pancreas ahambisa i-insal insulin njalo, amahora angama-24 ngosuku. Futhi, ephendula ekudleni, ubuye futhi uphonsa ngokucophelela izingxenye ezinkulu ze-insulin egazini. Lokhu kubizwa ngokuthi umthamo we-bolus noma i-bolus.
Ama-Boluses akhuphula ukuhlushwa kwe-insulin isikhathi esifushane. Lokhu kwenza ukuthi sikwazi ukucisha ushukela owandayo owenzeka ngenxa yokutholwa kokudla okudliwayo. Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1, amanyikwe awakhiqizi i-basal noma i-bolus insulin. Imijovo ye-insulin esebenza isikhathi eside ihlinzeka ingemuva le-insulin, ukuhlushwa kwe-insulin insulin.Kubalulekile ukuthi umzimba "ungagcini" amaprotheni awo futhi ungenzi i-ketoacidosis yesifo sikashukela.
Omunye umgomo wokwelapha isifo sikashukela nge-insulin ende ukuvimbela ukufa kwamanye amaseli we-pancreatic beta cell. Ukufakwa kweLantus, iLevemir noma iProtafan kunciphisa umthwalo kumanyikwe. Ngenxa yalokhu, amangqamuzana ambalwa e-beta afa, amaningi awo ahlala ephila. Ukufakwa kwama-insulin okwandisiwe ebusuku kanye / noma ekuseni kukhulisa ithuba lokuthi uhlobo 2 lwesifo sikashukela lungangeni kuhlobo olubi lukashukela. Ngisho nasezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1, uma ingxenye yamaseli we-beta ingagcinwa iphila, inkambo yalesi sifo iyathuthuka. Ushukela awukweqeki, kugcina kusondele kakhulu ngokujwayelekile.
I-insulin esebenza isikhathi eside isetshenziselwa injongo ehluke ngokuphelele kune-insulin esebenza ngokushesha ngaphambi kokudla. Akuhloselwe ukunciphisa ushukela wegazi ngemuva kokudla. Futhi, akufanele isetshenziselwe ukwehlisa ushukela ngokushesha uma kuphakama ngokungazelele kuwe. Ngoba i-insulin esebenza isikhathi eside iyephuza kakhulu kwalokho. Ukuze udle ukudla okudlayo, sebenzisa i-insulin emifushane noma ye-Ultra-iDemo. Okufanayo kuhamba ngokushesha ukuletha ushukela omningi kukujwayelekile.
Uma uzama ukwenza ukuthi yiziphi izinhlobo ezengeziwe ze-insulin ezenzelwe i-insulin eyengeziwe, imiphumela yokwelashwa kwesifo sikashukela izoba mibi kakhulu. Isiguli sizoba nokugeleza okuqhubekayo koshukela wegazi, okubangela ukukhathala okungapheli nokucindezeleka. Ungakapheli iminyaka embalwa, kuzovela izinkinga ezinzima ezizokwenza umuntu akhubazeke.
Uyini umehluko phakathi kwe-molecule yeLantus ne-insulin yabantu
I-Insulin Lantus (Glargin) ikhiqizwa kusetshenziswa izindlela zobunjiniyela bezakhi zofuzo. Itholakala ngokuphindaphinda kwe-Escherichia coli Escherichia coli bacteria bacteria (K12 strains). Ku-molecule ye-insulin, uGlargin ungene esikhundleni se-asparagine nge-glycine esesikhundleni sama-21 e-A chain, kwengezwa nama-molecule amabili e-arginine asesikhundleni sama-30 e-B chain. Ukufakwa kwamamolekyuli amabili e-arginine ku-C-terminus ye-B-chain kuguqule iphuzu le-isoelectric kusuka ku-pH 5.4 kuye ku-6.7.
I-Lantus insulin molecule - incibilika kalula nge-pH ene-acid. Ngasikhathi sinye, ingaphansi kwe-insulin yomuntu, encibilikayo ku-pH yemvelo yezicubu ezi-subcutaneous. Ukubuyisela i-asparagine ye-A21 nge-glycine akuhlangene nakancane nezwe. Kwenziwa ukuhlinzeka nge-analogue ephumayo ye-insulin yabantu ngokuqina okuhle. I-Insulin Glargin ikhiqizwa kwi-pH ene-acid engu-4,5, futhi ngenxa yalokho ayenqatshelwe ukuxuba ne-insulin ekhiqizwa endaweni ye-pH engathathi hlangothi, futhi nokuyihlikihla nge-saline noma emanzini ancishisiwe.
I-Insulin Lantus (Glargin) inomphumela wesikhathi eside ngenxa yokuthi ine-pH ekhethekile ekhethekile. Ukushintshwa kwe-pH kuholele ekutheni lolu hlobo lwe-insulin luqhume kancane lapho kutholakala khona umzimba we-pH wezicubu ze-subcutaneous izicubu. ILantus (Glargin) iyisisombululo esicacile nesicacile. Ngemuva kokuphathwa kwe-insulin kokuzenzakalelayo, kwakha ama-micorecipients ku-pH yemvelo yokungathathi hlangothi yesikhala esisekupheleni. I-Insulin Lantus akufanele ihlanjululwe nge-saline noma ngamanzi ngomjovo, ngoba ngenxa yalokhu, i-pH yayo izosondela ejwayelekile, futhi inqubo yesenzo eside se-insulin izophazamiseka. Ubuhle beLevemir ukuthi kubonakala sengathi buhlanjululwe ngangokunokwenzeka, yize lokhu kungemukelwa ngokusemthethweni, funda okuningi ngezansi.
Izici ze-insulin ye-insulin ende (Detemir)
I-Insulin Levemir (Detemir) ngenye i-analogue ye-insulin esebenza isikhathi eside, incintisana kuLantus, eyakhiwa uNovo Nordisk. Uma kuqhathaniswa ne-insulin yomuntu, i-amino acid esemolecule yeLevemir isuswe isendaweni engu-30 yenani le-B. Esikhundleni salokho, insalela ye-acid enamafutha, i-myristic acid, equkethe ama-athomu ayi-14 ekhabhoni, ifakwe ku-amino acid lysine esesikhundleni sama-29 seB B chain. Ngenxa yalokhu, u-98-99% we-insulin Levemir esegazini ngemuva kokuthi umjovo ubophele i-albhamuin.
I-Levemir idonswa kancane kancane kusuka kusayithi lomjovo futhi iba nomphumela wesikhathi eside. Umphumela wazo obambezelayo utholakala ngenxa yokuthi i-insulin ingena egazini kancane, futhi futhi ngenxa yokuthi amangqamuzana e-insulin analogue angena kumaseli okuqondiwe kancane. Njengoba lolu hlobo lwe-insulin lungenayo inani eliphakeme lesenzo, ubungozi be-hypoglycemia buncishisiwe ngo-69%, kanye ne-hypoglycemia yasebusuku - ngo-46%. Lokhu kuboniswe yimiphumela yocwaningo lweminyaka emi-2 ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1.
Yikuphi insulin okuhlala isikhathi eside kungcono - uLantus noma Levemir?
U-Lantus noLevemir bayizifaniso ze-insulin esebenza isikhathi eside, futhi impumelelo enkulu yakamuva ekwelapheni isifo sikashukela nge-insulin. Babalulekile ngoba banephrofayili yesenzo esizinzile ngaphandle kweziqongo - umdwebo wokuhlaselwa kwe-plasma walezi zinhlobo ze-insulin unendlela "yomoya wendiza". Ikopisha ukuqina okujwayelekile komzimba kwe-insalal (ingemuva) ye-insulin.
I-Lantus ne-Detemir izinhlobo ezinzile futhi ezingabikezelwa ze-insulin. Basebenza cishe ngokufanayo ezigulini ezahlukahlukene, kanye nangezinsuku ezahlukahlukene esigulini esifanayo. Manje umuntu onesifo sikashukela akadingi ukuxuba noma yini ngaphambi kokuzinikeza umjovo we-insulin ende, futhi ngaphambi kwalokho kwaba nokuxabana okuningi nge-insulin protafan.
Kwiphakethe yeLantus kubhaliwe ukuthi yonke i-insulin kumele isetshenziswe kungakapheli amasonto amane noma izinsuku ezingama-30 ngemuva kokuba iphakethe seliphrintiwe. ILevemir inempilo yasemashalofini esemthethweni ephindwe izikhathi eziyi-1.5, kuze kube ngamaviki ayi-6, futhi ingekho emthethweni kuze kufike kumaviki ayi-8. Uma ulandela ukudla okune-carbohydrate ephansi yohlobo 1 noma isifo sikashukela 2, uzodinga imithamo ephansi yansuku zonke ye-insulin. Ngakho-ke, i-Levemir izoba lula ngokwengeziwe.
Kukhona neziphakamiso (ezingafakazelwa!) Ukuthi iLantus inyusa ingozi yomdlavuza kunezinye izinhlobo ze-insulin. Isizathu kungenzeka ukuthi iLantus inobuhlobo obuphezulu bokukhula kwama-hormone receptors akhiwe ngaphezulu kwamaseli womdlavuza. Imininingwane ngokubandakanyeka kukaLantus kumdlavuza ayikaze ifakazelwe, imiphumela yocwaningo iyaphikisana. Kodwa kunoma yikuphi, iLevemir ishibhile futhi ekusetshenzisweni akukubi kangako. Inzuzo enkulu ukuthi iLantus akufanele ihlanjululwe nhlobo, kanti noLevemir - ngangokunokwenzeka, albeit ngokwethukela. Futhi, ngemuva kokuqala kokusetshenziswa, iLevemir igcinwa isikhathi eside kuneLantus.
Iziguli eziningi ezinesifo sikashukela kanye nama-endocrinologists zikholelwa ukuthi uma kukhishwa imithamo emikhulu, khona-ke umjovo owodwa weLantus ngosuku uyanele. Kunoma ikuphi, i-levemir kufanele ifakwe kabili ngosuku, futhi ngenxa yalokho, ngemithamo emikhulu ye-insulin, kulula kakhulu ukwelashwa ngeLantus. Kepha uma usebenzisa uhlelo lokwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 1 noma uhlobo lwenkinga yesifo sikashukela, izixhumanisi ezinikezwe ngezansi, ngakho-ke awuzukudinga imithamo emikhulu ye-insulin eyengeziwe. Asizisebenzisi imithamo emikhulu kangako yokuthi iyaqhubeka nokusebenza usuku lonke, ngaphandle kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 esinokukhuluphala kakhulu. Ngoba indlela yodwa yemithwalo emincane ekuvumela ukuthi ufinyelele ngokulawula ushukela wegazi ngohlobo 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela.
Sigcina ushukela wegazi ongu-4.6 ± 0,6 mmol / L, njengabantu abanempilo, amahora angama-24 ngosuku, ngokuguquguquka okuncane ngaphambi nangemva kokudla. Ukuze ufeze lo mgomo wokufuna ukuvelela, udinga ukujova i-insulin ende ngemithamo emincane kabili ngosuku. Uma isifo sikashukela siphathwa ngemithamo emincane ye-insulin ende, khona-ke isikhathi sokusebenza kukaLantus noLevemir cishe sizoba njalo. Ngasikhathi sinye, izinzuzo zeLevemire, esizichazile ngenhla, zizozibonakalisa.
Yelashwa kanjani isifo sikashukela sohlobo 2: inqubo yesinyathelo-nesinyathelo
Thayipha amakhambi wesifo sikashukela: i-athikili enemininingwane
Amatafula weSiofor ne-Glucofage
Ungakufunda kanjani ukujabulela imfundo yomzimba
Thayipha uhlelo lokwelapha isifo sikashukela lwabantu abadala nezingane
Isikhathi se-honeymoon nokuthi ungayandisa kanjani
Indlela yemijovo engenayo i-insulin
Thayipha isifo sikashukela esi-1 ingane elashwa ngaphandle kwe-insulin isebenzisa ukudla okufanele. Izingxoxo nomndeni.
Ungakunciphisa kanjani ukubhujiswa kwezinso
Kungani kungathandeki ukusebenzisa i-NPH-insulin (protafan)
Kuze kube ngasekupheleni kweminyaka yama-1990s, izinhlobo ezimfishane ze-insulin zazihlanzekile njengamanzi, futhi zonke ezinye zazinamafu, i-opaque. I-insulin iba ngamafu ngenxa yokungezelelwa kwezakhi ezakha izinhlayiya ezikhethekile ezincibilika kancane kancane ngaphansi kwesikhumba somuntu. Kuze kube manje, Uhlobo olulodwa kuphela lwe-insulin oluye lube namafu - ubude besikhathi besenzo, obubizwa ngokuthi yi-NPH-insulin, babuye babonakale. I-NPH imele i- “Hagedorn's Neutral Protamine,” iprotheni yemvelaphi yezilwane.
Ngeshwa, i-NPH-insulin ingavusa amasosha omzimba ukuba akhiqize ama-antibodies e-insulin. Lawa ma-antibodies awabhubhisi, kepha abopha okwesikhashana ingxenye ye-insulin ayenze ingasebenzi. Lapho-ke i-insulin eboshiwe ivele isebenze lapho ingasadingeki. Lo mphumela ubuthakathaka kakhulu. Kwabashukela abajwayelekile, ukuphambuka kashukela we-± 2-3 mmol / L akukhathaleli kangako, futhi abakwakuboni. Sizama ukugcina ushukela wegazi ojwayelekile kahle, isb. 4.6 ± 0,6 mmol / l ngaphambi nangemva kokudla. Ukuze senze lokhu, sisebenzisa uhlelo lokwelapha isifo sikashukela sohlobo lwe-1 noma uhlelo lokwelapha isifo sikashukela sohlobo 2. Esimweni sethu, isenzo esingazinzile se-insulin ephakathi siyabonakala futhi sonakalisa isithombe.
Kunenye inkinga nge-protamine Hagedorn engathathi hlangothi. I-Angiography ukuhlolwa kwemithambo yegazi ephakela inhliziyo ukuthola ukuthi bathinteka kangakanani yi-atherosclerosis. Le yinqubo ejwayelekile yokwelashwa. Ngaphambi kokuyiqhuba, isiguli sinikezwa umjovo we-heparin. Lesi yi-anticoagulant evimbela ama-platelet ukuthi anganamatheki futhi avimbele imithambo yegazi ngezigaba zegazi. Ngemuva kokuba inqubo isiqediwe, kwenziwa omunye umjovo - INUL ikhishwa “ukucisha” i-heparin. Ngephesenti elincane labantu abelashwa nge-protafan insulin, ukusabela okuphathelene nokubi okwenzeka emzimbeni kwenzeka kulesi sikhathi, okungaholela ekufeni.
Isiphetho ukuthi uma kungenzeka ukusebenzisa okunye okunye esikhundleni se-NPH-insulin, ke kungcono ukwenza lokhu. Njengomthetho, abanesifo sikashukela badluliswa besuka ku-NPH-insulin bayiswe ku-insulin analogue Levemir noma uLantus. Ngaphezu kwalokho, zibonisa nemiphumela emihle kakhulu yokulawulwa kweshukela.
Ukuphela kwe-niche lapho ukusetshenziswa kwe-NPH-insulin kuhlala kufanelekile namuhla ise-USA (!) Izingane ezincane ezinesifo sikashukela sohlobo 1. Zidinga imithamo ephansi kakhulu ye-insulin yokwelashwa. Le imithamo mncane kakhulu kangangokuba kufanele i-insulin ihlanjululwe. E-United States, lokhu kwenziwa kusetshenziswa izixazululo zokuphathelene nokufakwa kwe-insulin. Kodwa-ke, kuma-insulin analogue wesenzo eside, izixazululo ezinjalo azikho. Ngakho-ke, uDkt Bernstein uphoqeleka ukuba anikeze imijovo ye-NPH-insulin, engahlanjululwa amahlandla ama-3-4 ngosuku, ezigulini zakhe ezisencane.
Emazweni akhuluma isiRussia, izixazululo ezinophawu lwe-insulin dilution azitholakali phakathi nomlilo, noma iyiphi imali, konke okuningi mahhala. Ngakho-ke, abantu banciphisela i-insulin ngokuthenga i-saline noma amanzi wokujova kumakhemisi. Futhi kubonakala sengathi le ndlela isebenza ngokungaphezulu noma ngaphansi, ukwahlulela ngezibuyekezo kumaforamu kashukela. Ngale ndlela, i-Levemir (kodwa hhayi iLantus!) I-insulin esebenza ngokungeziwe iyenziwa. Uma usebenzisa i-NPH-insulin enganeni, khona-ke kuyodingeka uyinciphise nekhambi elilodwa likasawoti njengoLevemir. Kufanele kukhunjulwe ukuthi iLevemir isebenza kangcono futhi akudingekile ukuyikhipha. Funda kabanzi esihlokweni esithi "Unganciphisa kanjani i-insulin ukufaka umjovo omncane kahle"
Ungawenza kanjani ushukela ekuseni esiswini esingenalutho ube yinto evamile
Ake sithi uphuza umthamo ophelele ovunyelwe wamaphilisi asebenzayo wesifo sikashukela sohlobo 2 ebusuku.Ngaphandle kwalokhu, ushukela wakho wegazi ekuseni esiswini esingenalutho uhlala njalo uvamile, futhi uvame ukwanda ubusuku bonke. Lokhu kusho ukuthi udinga imijovo ye-insulin enwetshiwe ubusuku bonke. Kodwa-ke, ngaphambi kokubeka imijovo enjalo, kufanele uqiniseke ukuthi onesifo sikashukela udla amahora angama-5 ngaphambi kokulala. Uma ushukela wegazi ukhuphuka phakathi nobusuku ngenxa yokuthi isiguli sikashukela sidle ukudla kwakusihlwa, khona-ke ukwandiswa kwe-insulin ebusuku ngeke kusize. Qinisekisa ukuthuthukisa umkhuba onempilo wokudla kwakusihlwa ngaphambi kwesikhathi. Faka isikhumbuzi kufoni yakho ephathekayo ngo-5.30 p.m. ukuthi sekuyisikhathi sokudla kwakusihlwa, bese udla isidlo sakusihlwa ngo-6 p.m.-6.30 p.m. Ngemuva kwesidlo sasekuseni ngosuku olulandelayo, uzokujabulela ukudla ukudla kwamaprotheni kokudla kwasekuseni.
Izinhlobo ezengeziwe ze-insulin nguLantus noLevemir. Ngaphezulu kwalesi sihloko sixoxe kabanzi ngokuthi bahluke kanjani komunye nomunye nokuthi iyiphi engcono ukusebenzisa. Ake sibheke ukuthi umjovo we-insulin enwetshiwe ebusuku usebenza kanjani. Udinga ukwazi ukuthi isibindi sikhuthele ikakhulu ekutholeni i-insulin ekuseni, ngaphambi nje kokuvuka. Lokhu kubizwa ngokuthi yinto yokusa yokusa. Nguye obangela ushukela wegazi ophakeme ekuseni esiswini esingenalutho. Akekho owaziyo izizathu zayo. Noma kunjalo, ingalawulwa kahle uma ufuna ukufeza ushukela ojwayelekile ekuseni ngesisu esingenalutho. Funda kabanzi ngemininingwane ethi "The Phenomenon of Morning Dawn kanye nendlela Yokulawula."
Ngenxa yomcimbi wokusa wasekuseni, ukujova isikhathi eside kokujova kwe-insulin ebusuku akunconywa kungakadluli amahora angama-8,5 ngaphambi kokuba uvuke ekuseni. Umphumela womjovo we-insulin yesikhathi eside ebusuku buthaka kakhulu amahora angama-9 ngemuva komjovo. Uma ulandela ekudleni okuphansi kwe-carbohydrate yesifo sikashukela, khona-ke imithamo yazo zonke izinhlobo ze-insulin, kufaka ne-insulin ende ebusuku, idinga okuncane. Esimweni esinjalo, imvamisa umphumela womjovo wakusihlwa weLevemir noma uLantus uyama ngaphambi kokuba ubusuku buphele. Yize abakhiqizi bethi isenzo salezi zinhlobo ze-insulin sihlala isikhathi eside.
Uma umjovo wakho wakusihlwa we-insulin enwetshiwe uqhubeka nokusebenza ubusuku bonke ngisho nasekuseni, kusho ukuthi ulimale kakhulu, futhi phakathi kobusuku ushukela wehla ngaphansi kokujwayelekile. Okuhle kakhulu, kuzoba namaphupho amabi, futhi okubi kakhulu, i-hypoglycemia enkulu. Udinga ukusetha i-alamu yokuvuka ngemuva kwamahora ama-4, phakathi nobusuku, futhi ulinganise ushukela wegazi lakho nge-glucometer. Uma ingaphansi kwe-3.5 mmol / L, bese uhlukanisa umthamo wakusihlwa we-insulin enwetshiwe ezingxenyeni ezimbili. Prick enye yalezi zingxenye hhayi ngokushesha, kodwa ngemuva kwamahora 4.
Sigcizelela futhi ukuthi: uma umthamo we-insulin isikhathi eside ukhuphuka ngokweqile ebusuku, khona-ke ushukela wokuzila ngeke wehlise ngakusasa ekuseni, kodwa kunalokho ukhuphuke.
Ukwehlukanisa umthamo wakusihlwa we-insulin enwetshiwe ezingxenyeni ezimbili, esinye sazo esifakwe phakathi kobusuku, sinembile impela. Ngalesi rejimeni, umthamo wokuhlwa ophelele we-insulin enwetshiwe ungancishiswa ngo-10-15%. Kuyindlela engcono kakhulu yokulawula into yokuqala yokusa futhi ube noshukela wegazi ojwayelekile ekuseni esiswini esingenalutho. Imijovo yasebusuku izobangela ubuncane bokuphazamiseka lapho uyijwayela. Funda ukuthi ungakuthola kanjani ukudubula kwe-insulin ngaphandle kobuhlungu. Phakathi kobusuku, ungafaka umjovo we-insulin isikhathi eside endaweni engazi lutho uma ulungiselela konke kusihlwa bese ulala futhi ngokushesha.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela nge-insulin: qala lapha. Izinhlobo ze-insulin nemithetho yokugcina kwayo.
Uhlobo luni lwe-insulin yokujova, ngasikhathi sini nokuthi imiphi imithamo. Izikimu zohlobo 1 sikashukela nohlobo 2 sikashukela.
Ama-insulin, ama-syringe amapeni nezinaliti kuwo. Imaphi amasirinji okungcono ukuwasebenzisa.
I-Ultrashort insulin Humalog, i-NovoRapid ne-Apidra. I-insulin emfushane yomuntu
Ukubalwa komthamo we-insulin ngaphambi kokudla. Ungawehlisela kanjani ushukela ube yinto ejwayelekile uma wagxuma
Ungayihluza kanjani i-insulin ukuze ujove ngokunembile imithamo ephansi
Ukwelashwa kwengane enesifo sikashukela sohlobo 1 kuxutshwe ne-insulin Humalog (isipiliyoni sasePoland)
Iphampu ye-insulin: ubuhle nezingozi. Ukwelashwa kwe-insulin
Ungabala kanjani umthamo wokuqala we-insulin enwetshiwe ebusuku
Umgomo wethu omkhulu ukukhetha imithamo efana neLantus, Levemir, noma iProtafan ukuze ushukela wokuzila ugcinwe ku-4.6 ± 0.6 mmol / L ngaso sonke isikhathi. Kunzima ikakhulukazi ukwenza ushukela ube ejwayelekile ekuseni esiswini esingenalutho, kodwa le nkinga ixazululwa futhi uma uzama. Ungayixazulula kanjani ichazwe ngenhla.
Zonke iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 zidinga imijovo ye-insulin eyengeziwe ebusuku nasekuseni, kanye nemijovo ye-insulin esheshayo ngaphambi kokudla. Kuvela imijovo engu-5-6 ngosuku. Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, isimo silula. Zingadinga ukujova njalo. Ikakhulu uma isiguli silandela ekudleni okuphansi kwe-carbohydrate futhi sinobuvila ukuzivocavoca ngentokozo. Iziguli zesifo sikashukela sohlobo 1 zibuye zelulekwe ukuba zishintshele ekudleni okune-carbohydrate ephansi kakhulu. Ngaphandle kwalokhu, ngeke ukwazi ukulawula kahle ushukela, noma ngabe usibala kangakanani isilinganiso se-insulin.
Okokuqala, silinganisa ushukela nge-glucometer izikhathi eziyi-10-12 ngosuku ngezinsuku ezingama-3-7 ukuze siqonde ukuthi uziphatha kanjani. Lokhu kuzosinika ulwazi ngasiphi isikhathi lapho udinga ukufaka khona i-insulin. Uma umsebenzi wamaseli we-beta we-pancreas agcinwe ngokwengxenye, khona-ke mhlawumbe uzokwazi ukuwujova ebusuku kuphela noma ekudleni okuhlukile. Uma isiguli esinesifo sikashukela sohlobo 2 sidinga imijovo ye-insulin ehlala isikhathi eside, okokuqala-ke uLantus, uLevemir noma uProtafan udinga ukujova ebusuku. Ngabe imijovo yesikhathi eside ye-insulin iyadingeka ekuseni? Kuya ngezinkomba zemitha. Thola ukuthi ushukela wakho ubamba ngokushesha kangakanani phakathi nosuku.
Okokuqala, sibala umthamo wokuqala we-insulin enwetshiwe, bese kuthi ngaphezulu kwezinsuku ezilandelayo sikuguqulele kuze kube umphumela wamukeleka
Ezinsukwini eziyi-7, silinganisa ushukela nge-glucometer ebusuku, bese kuthi ngakusasa ekuseni esiswini esingenalutho.
Imiphumela irekhodwe etafuleni.
Sibala usuku ngalunye: ushukela ekuseni kushukela elingenalutho ushukela izolo ebusuku.
Silahla izinsuku lapho umuntu onesifo sikashukela edla isidlo sakusihlwa ngaphambi kwamahora angama-4-5 ngaphambi kokulala.
Sithola inani eliphansi lalokhu kwanda esikhathini sokubukwa.
Incwadi eyinkomba izothola ukuthi i-1 UNIT ye-insulin yehlisela kanjani ushukela wegazi. Lokhu kubizwa ngokuthi yi-putative insulin sensitivity factor.
Hlukanisa inani elincane lokukhuphuka ushukela ubusuku ngabunye bokulinganiselwa okulinganiselwe bokuzwela kwe-insulin. Lokhu kusinikeza umthamo wokuqala.
Stab kusihlwa umthamo obaliwe we-insulin enwetshiwe. Sibeka i-alamu yokuvuka phakathi kobusuku sibheke ushukela.
Uma ushukela ebusuku ungaphansi kuka-3.5-3.8 mmol / L, umthamo wakusihlwa we-insulin kumele wehliswe. Indlela iyasiza - ukudlulisa ingxenye yayo injekweni elingeziwe ngo-1 ekuseni.
Ngezinsuku ezilandelayo, sandisa noma sinciphise umthamo, zama imijovo ehlukile, kuze kuthi ushukela wasekuseni ungaphakathi kwebanga elijwayelekile le-4.6 ± 0.6 mmol / L, njalo ngaphandle kwe-hypoglycemia ebusuku.
Idatha yesibonelo yokubala umthamo wokuqala weLantus, Levemir noma iProtafan ebusuku
Siyabona ukuthi idatha yangoLwesine idinga ukulahlwa, ngoba isiguli siqede ukudla kwakusihlwa sekwedlule isikhathi. Ngezinye izinsuku, ukuzuzwa okungenani koshukela ngobusuku kwakungoLwesihlanu. Kwakufika ku-4.0 mmol / L. Sithatha ukukhula okuncane, hhayi isilinganiso noma isilinganiso. Umgomo uwukuthi umthamo wokuqala we-insulin ube uphansi kunokuphakama. Ngaphezu kwalokho, lokhu kuvikela isiguli ekulweni ne-hypoglycemia yangemuva kosuku. Isinyathelo esilandelayo ukuthola isilinganiso esilinganiselwe sokuzwela kwe-insulin kusuka kunani lethebula.
Ake sithi esigulini esinesifo sikashukela sohlobo 1, i-pancreas iyekile ngokuphelele ukukhiqiza i-insulin yayo. Kulokhu, iyunithi eli-1 le-insulin enwetshiwe lizokwehlisa ushukela wegazi cishe ngo-2.2 mmol / L kumuntu onesisindo esingu-64 kg. Lapho ukala kakhulu, kuba nzima ukwenza i-insulin.Isibonelo, kumuntu onesisindo esingu-80 kg, izotholwa ngumuntu onesisindo esingu-80 kg / L * 64 kg / 80 kg = 1.76 mmol / L. Sixazulula inkinga yokuhlanganisa ingxenye ethile evela kwisifundo sokuqala sezibalo zesikole.
Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo olubi, sithatha leli nani ngqo. Kepha ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2 noma uthayiphe ushukela ongu-1 ngendlela emnene, kuzoba kukhulu kakhulu. Ake sithi i-pancreas yakho isakhiqiza i-insulin. Ukuqeda ubungozi be-hypoglycemia, okokuqala sizocubungula "nge-margin" ukuthi iyunithi eli-1 le-insulin elandisiwe lehlisa ushukela wegazi cishe ngo-4,4 mmol / l futhi linesisindo esingu-64 kg. Udinga ukunquma leli nani lesisindo sakho. Yenza isilinganiso, njengasesibonelweni esingenhla. Enganeni enesisindo esingu-48 kg, izotholakala ngo-4,4 mmol / L * 64 kg / 48 kg = 5.9 mmol / L. Esigulini esondleke kahle ngohlobo 2 sikashukela esinesisindo somzimba esingama-80 kg, u-4.4 mmol / L * 64 kg / 80 kg = 3.52 mmol / L.
Sesivele sathola ukuthi esigulini sethu, ukwanda okuncane koshukela wegazi ubusuku ngabunye kwakungu-4.0 mmol / L. Isisindo somzimba waso singama-80 kg. Ngaye, ngokuya "ngokuqikelela" kokuhlola i-1 U ye-insulin ende, uzokwehlisa ushukela wegazi ngo-3.52 mmol / L. Kulesi simo, kuye, umthamo wokuqala we-insulin enwetshiwe ebusuku uzoba amayunithi we-4.0 / 3.52 = 1.13. Round to the PIERES 1/4 eliseduze bese uthola ama-1.25 PIECES. Ukujova ngokunembile umthamo ophansi onjalo, kufanele ufunde ukuthi ungahluza kanjani i-insulin. ILantus akufanele ihlanjululwe. Ngakho-ke, kuzodingeka ukuthi uqunywe 1 iyunithi noma ngokushesha amayunithi ayi-1.5. Uma usebenzisa i-Levemir esikhundleni seLantus, mane uyihlinzele ukujova ngokunembile ama-1.25 PIECES.
Ngakho-ke, bajova umthamo wokuqala we-insulin enwetshiwe ubusuku bonke. Ezinsukwini ezilandelayo, siyalungisa - sikhuphuke noma sinciphe kuze kube ushukela ekuseni esiswini esingenalutho uzinzile ku-4.6 ± 0,6 mmol / l. Ukufeza lokhu, kuzodingeka uhlukanise umthamo kaLantus, Levemir noma iProtafan ngobusuku bese unika ingxenye ethile phakathi kobusuku. Funda imininingwane engenhla esigabeni esithi “Ungawenza Kanjani Ushukela Asheshe Ekuseni”.
Zonke izinhlobo zohlobo lwe-1 noma uhlobo lwe-2 yesifo sikashukela esikudla okune-carbohydrate encane kufanele zifunde ukuthi zinganciphisa kanjani i-insulin ukufaka imijovo ephansi kahle. Futhi uma ungakashintsheli ekudleni okune-carbohydrate ephansi, khona-ke wenzani lapha?
Ukulungiswa komthamo we-insulin isikhathi eside ebusuku
Ngakho-ke, sithole ukuthi singabalwa kanjani isilinganiso esilinganiselwe sokuqala se-insulin ebusuku. Uma ufunde izibalo esikoleni, khona-ke ungamelana naso. Kepha lokho bekuyisiqalo nje. Ngoba umthamo wokuqalisa kungenzeka uphansi kakhulu noma uphezulu kakhulu. Ukulungisa umthamo we-insulin isikhathi eside ebusuku, uqopha amazinga kashukela egazini lakho ngaphambi kokulala izinsuku eziningana, bese ekuseni ngesisu esingenalutho. Uma ukukhuphuka okuphezulu koshukela ngobusuku kwakungekho okuphezulu kune-0.6 mmol / l - khona-ke umthamo ulungile. Kulokhu, udinga ukubheka lezo zinsuku kuphela ongadli ngazo isidlo sakusihlwa ngaphambi kwamahora ama-5 ngaphambi kokulala. Ukudla kusenesikhathi kuwumkhuba obalulekile wabanesifo sikashukela abelashwa nge-insulin.
Uma ukwanda okuphezulu kushukela ngosuku ubusuku kudlule ku-0,6 mmol / L - kusho ukuthi umthamo wakusihlwa owengeziwe we-insulin kufanele uzame ukwanda. Ungayenza kanjani? Kuyadingeka ukuyinyusa ngo-0,25 PIECES njalo ezinsukwini ezi-3, bese nsuku zonke ukuqapha ukuthi lokhu kuzothinta kanjani ukwanda ebusuku koshukela egazini. Qhubeka ukhuphule kancane umthamo kuze kube yilapho ushukela ekuseni ungaphezu kuka-0.6 mmol / L ephakeme kunoshukela wakho wakusihlwa. Funda futhi ukuthi ungayilawula kanjani into yokusa yokusa.
Ungayikhetha kanjani isilinganiso esifanele se-insulin enwetshiwe ebusuku:
Udinga ukufunda ukudla ngaphambi kwesikhathi, amahora ama-4-5 ngaphambi kokulala.
Uma ngabe udle isidlo sakusihlwa sekwedlule isikhathi, khona-ke usuku olunjalo alulungele ukulungiswa kwamthamo we-insulin enwetshiwe ebusuku.
Kanye ngesonto ngezinsuku ezahlukahlukene, hlola ushukela wakho phakathi kobusuku. Kufanele okungenani ibe ngu-3.5-3.8 mmol / L.
Khuphula umthamo wakusihlwa we-insulin enwetshiwe uma izinsuku ezingama-2-3 ushukela ulayini ekuseni esiswini esingenalutho ungaphezu kuka-0,6 mmol / L ukuphakama kunendlela okwakukhona ngayo izolo ngaphambi kokulala.
Iphuzu elidlule - cabanga kuphela ngalezo zinsuku lapho wawudla isidlo sakusihlwa ekuseni!
Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2 ezilandela ukudla okune-carbohydrate ephansi. Umthamo we-insulin isikhathi eside ubusuku bunconywa ukuthi ukhuphuke ngamagumbi angaphezu kuka-0.25 njalo ezinsukwini ezi-3. Umgomo ukuthola ngokwakho ukuthola umshuwalense ngangokunokwenzeka kusuka ebusuku hypoglycemia.
Kubalulekile! Uma ukhuphula umthamo wakusihlwa we-insulin enwetshiwe - ezinsukwini ezingama-2-3 ezilandelayo, qiniseka ukuthi ubheka ushukela wakho phakathi kobusuku.
Kuthiwani uma ushukela ebusuku kungazelelwe kube ongaphansi kokujwayelekile noma amaphupho amabi akukhathaza? Ngakho-ke, udinga ukwehlisa umthamo we-insulin, omjovo ngaphambi kokulala.
Uma udinga ukwehlisa umthamo wakusihlwa we-insulin enwetshiwe, kunconywa ukuthi udlulise ingxenye yayo kumjovo owengeziwe ngo-1: 30 ekuseni.
Ukuvimbela i-hypoglycemia yasebusuku
Funda i-athikili esemqoka, iHypoglycemia kwisifo sikashukela. Ukuvimbela nokukhululeka kwe-hypoglycemia. "
I-hypoglycemia yasebusuku enamaphupho amabi isehlakalo esingathandeki futhi esiyingozi uma uhlala wedwa. Ake sibheke ukuthi singakuvikela kanjani lapho usanda kuqala ukwelapha ushukela wakho ngemijovo ye-insulin eyengeziwe ubusuku bonke. Setha i-alamu ukuze ikuvuse amahora angama-6 ngemuva kokudubula kusihlwa. Lapho uvuka, ukukala ushukela wegazi lakho nge-glucometer. Uma ingaphansi kwe-3.5 mmol / l, yidla ama-carbohydrate amancane ukuze kungabikho i-hypoglycemia. Lawula ushukela wakho ebusuku ezinsukwini zokuqala zesifo sikashukela se-insulin, kanye ngaso sonke isikhathi lapho uzama ukwandisa umthamo we-insulin enwetshiwe ubusuku bonke. Noma linye icala elinjalo lisho ukuthi umthamo udinga ukuncishiswa.
Iningi labanesifo sikashukela esisezingeni eliphansi lidinga umthamo owengeziwe we-insulin ngobusuku obubodwa bamayunithi angaphansi kwayi-8. Okuhlukile kulo mthetho yiziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 noma 2, eskhulu kakhulu, i-gastroparesis yesifo sikashukela, kanye nalezo ezinesifo esithathelwanayo manje. Uma ufaka i-insulin ngobusuku obunye kumthamo wamaayunithi ayi-7 noma ngaphezulu, khona-ke izakhiwo zawo ziyaguquka, uma kuqhathaniswa nemithamo emincane. Kuhlala isikhathi eside. I-Hypoglycemia ingahle yenzeke ngaphambi kokudla kwakusihlwa ngosuku olulandelayo. Ukugwema lezi zinkinga, funda "Ungawufaka kanjani umjovo omkhulu we-insulin" bese ulandela izincomo.
Uma udinga umthamo omkhulu kusihlwa weLantus, Levemir noma iProtafan, okungukuthi, wedlula amayunithi ayi-8, bese sincoma ukuwahlukanisa ngokuhamba kwesikhathi, phakathi nobusuku. Kusihlwa, iziguli ezinesifo sikashukela zilungiselela konke okudingakalayo, zibeka i-alamu phakathi kobusuku, kuthi lapho zifona zisesimweni sokungazi lutho, zizithambise bese zilala futhi. Ngenxa yalokhu, imiphumela yokwelashwa sikashukela yathuthuka kakhulu. Kuyafaneleka ukuphazamiseka ukuvikela i-hypoglycemia futhi uthole ushukela wegazi ojwayelekile ekuseni ngakusasa. Ngaphezu kwalokho, ukuphazamiseka kuzoba kuncane uma usuyiqonda kahle inqubo yemijovo engenayo i-insulin.
Ngabe udinga imijovo ye-insulin enwetshiwe ekuseni?
Ngakho-ke, sithole indlela yokugwaza iLatnus, Levemir noma iProtafan ngobusuku. Okokuqala, sinquma ukuthi ngabe lokhu sikwenza ngokuphelele yini. Uma kuvela ukuthi udinga, lapho-ke sibala futhi siqonde umthamo wokuqala. Bese siyayilungisa kuze kube ushukela ekuseni esiswini esingenalutho kuyinto evamile ku-4.6 ± 0,6 mmol / l. Maphakathi nobusuku, akufanele iwele ngaphansi kuka-3.5-3.8 mmol / L. Ukugqamisa okufunde kuwebhusayithi yethu ukuthatha i-insulin eyengeziwe ukudubula phakathi kobusuku ukulawula into yokusa yokusa. Ingxenye yedosi yakusihlwa idluliselwa kuyo.
Manje ake sinqume ngomthamo wasekuseni we-insulin owengeziwe. Kepha nansi ubunzima. Ukuxazulula izingqinamba ngomjovo we-insulin enwetshiwe ekuseni, udinga ukubulawa yindlala phakathi nosuku kusuka kusihlwa kuya kusihlwa. Sijova uLantus Levemir noma uProtafan ukugcina ushukela ojwayelekile wokuzila. Ebusuku ulala futhi ulambe ngokwemvelo. Futhi ntambama ukuqapha ushukela esiswini esingenalutho, kufanele wenqabe ukudla. Ngeshwa, le ukuphela kwendlela eqinisekile yokubala umthamo wasekuseni we-insulin enwetshiwe. Inqubo engezansi ichazwe ngokuningiliziwe.
Ake sithi une-jumpe ushukela phakathi nosuku noma ihlala iphakama ngokuqinile.Umbuzo obaluleke kakhulu: ingabe ushukela wakho uyanda ngenxa yokudla noma esiswini esingenalutho? Khumbula ukuthi i-insulin eyengeziwe iyadingeka ukuze kulondolozwe ushukela ojwayelekile wokuzila, futhi ngokushesha - ukugwema ukwanda koshukela wegazi ngemuva kokudla. Siphinde sisebenzise i-insulin ye-ultrashort ukunciphisa ushukela ube okwejwayelekile uma usagxuma.
Ukuqeda ushukela wegazi ngemuva kokudla i-insulin emfushane, noma ukujova insulin eyengeziwe ekuseni ukugcina ushukela ojwayelekile esiswini esingenalutho usuku lonke kuhluke ngokuphelele. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuthola ukuthi ushukela wakho uziphatha kanjani phakathi nosuku, futhi kuphela emva kwalapho unqume irejimeni yokwelashwa kwe-insulin ngosuku. Odokotela abangafundile kanye nabanesifo sikashukela bazama ukusebenzisa i-insulin emfushane ngosuku lapho kudingeka khona isikhathi eside, kanti okuphambene nalokho. Imiphumela iyadabukisa.
Kuyadingeka ngokuzama ukuthola ukuthi ushukela wegazi lakho uziphatha kanjani phakathi nosuku. Ingabe lukhuphuka njengokudla noma esiswini esingenalutho futhi? Ngeshwa, kufanele ulambe ukuze uthole lolu lwazi. Kepha ukuhlolwa kuyadingeka impela. Uma ungadingi imijovo ye-insulin ende isikhathi eside ukuze unxephezele izehlakalo zokusa kokusa, akunakwenzeka ukuthi ushukela wakho wegazi uzovuka phakathi nosuku esiswini esingenalutho. Kepha noma kunjalo udinga ukubheka futhi uqiniseke. Ngaphezu kwalokho, kufanele wenze ukuhlolwa uma uthola imijovo ye-insulin enwetshiwe ebusuku.
Ungayikhetha kanjani idosi kaLantus, Levemir noma iProtafan ekuseni:
Ngosuku lokuhlolwa, ungadli ibhulakufesi noma isidlo sasemini, kodwa hlela ukudlela isidlo sasebusuku amahora angama-13 ngemuva kokuvuka kwakho. Lesi kuphela isikhathi esivunyelwe ukuthi udle sekwephuzile.
Uma uthatha i-Siofor noma i-Glucofage ende, thatha umthamo wakho ojwayelekile ekuseni.
Phuza amanzi amaningi usuku lonke; ungasebenzisa itiye le-herbal ngaphandle koshukela. Musa ukulamba ukuzeome. I-coffee, cocoa, itiye elimnyama neluhlaza - kungcono ukungaphuzi.
Uma uthatha imishanguzo yesifo sikashukela engadala i-hypoglycemia, manje-ke ungayiphathi futhi uyilahle ngokujwayelekile. Funda ukuthi yimaphi amaphilisi wesifo sikashukela amabi futhi amahle.
Linganisa ushukela wakho wegazi ngemitha kashukela egazini ngokushesha nje lapho uvuka, bese uphinde emva kwehora eli-1, ngemuva kwamahora angama-5, ngemuva kwamahora angama-9, ngemuva kwamahora ayi-12 namahora ayi-13 ngaphambi kokudla kwakusihlwa. Sekukonke, uzothatha izilinganiso ezi-5 phakathi nosuku.
Uma phakathi namahora we-13 ushukela wokuzila nsuku zonke ukhuphuke ngaphezu kwe-0,6 mmol / l futhi ungazange uwele, khona-ke udinga imijovo ye-insulin eyengeziwe ekuseni esiswini esingenalutho. Sibala umthamo weLantus, Levemir noma iProtafan yalawa majekiseni ngendlela efanayo ne-insulin eyengeziwe ubusuku.
Ngeshwa, ukuze uguqule umthamo wasekuseni we-insulin isikhathi eside, kufanele usheshe ngendlela efanayo usuku olungaphelele futhi ubheke ukuthi ushukela wegazi uziphatha kanjani ngalolu suku. Ukusinda ezinsukwini ezilambile kabili ngesonto elilodwa akukubi neze. Ngakho-ke, linda kuze kufike isonto elilandelayo ngaphambi kokwenza isivivinyo esifanayo sokulungisa umthamo wakho we-insulin oqhubeka ekuseni. Sigcizelela ukuthi yonke le nqubo enzima iyadingeka kuphela kulezi ziguli ezilandela ukudla okune-carbohydrate eningi futhi zizama ukugcina ushukela ojwayelekile ophelele 4.6 ± 0.6 mmol / L. Uma ukuphambuka kwe-± 2-4 mmol / l kungakukhathazi, khona-ke awunakukhathazeka.
Ngohlobo 2 lwesifo sikashukela, kungenzeka kakhulu ukuthi udinga imijovo ye-insulin ngokushesha ngaphambi kokudla, kepha awudingi imijovo ye-insulin eyengeziwe ekuseni. Kodwa-ke, lokhu akunakubikezelwa ngaphandle kokuzama, ngakho-ke ungabi sevila ukukufeza.
Ake sithi uqala ukwelapha isifo sikashukela sohlobo 2 ngemijovo eyengeziwe ye-insulin ebusuku, mhlawumbe ekuseni. Ngemuva kwesikhathi esithile, uzokwazi ukukhetha umthamo ofanele we-insulin ukugcina ushukela wegazi ojwayelekile amahora angama-24 ngosuku. Ngenxa yalokhu, ama-pancreas angakwazi ukuzungeza ukuthi ngaphandle kwemijovo ye-insulin esheshayo kuvame ukwenqabela ukwanda koshukela ngemuva kokudla. Lokhu kwenzeka kaningi ngesimo sohlobo 2 sikashukela. Kepha uma ngemuva kokudla ushukela wakho wegazi uyaqhubeka ungaphezulu kuka-0,6 mmol / L ephakeme kunokwejwayelekile kubantu abanempilo, kuzodingeka futhi ufake imijovo ye-insulin efushane ngaphambi kokudla. Ngemininingwane eminingi, bheka "Ukubalwa komthamo we-insulin esheshayo ngaphambi kokudla."
I-insulin enwetshiwe uLantus noLevemir: izimpendulo zemibuzo
I-hemoglobin ye-Glycated yehle yaya ku-6.5% - kuhle, kepha kusekhona umsebenzi okufanele wenziwe :). ILantus ingagwazwa kabili ngosuku. Ngaphezu kwalokho, sincoma ukuthi wonke umuntu enze lokhu ukuthuthukisa ukulawulwa kwesifo sikashukela. Kunezizathu ezithile zokukhetha iLevemir esikhundleni seLantus, kepha azibalulekanga. Uma uLantus enikezwa mahhala, kepha uLevemir - cha, bese uthambisa ngomoya ophansi kabili ngosuku i-insulin leyo umbuso ekunika yona.
Ngokuqondene nokungafanelani kweLantus neNovoRapid nezinye izinhlobo ze-insulin ezivela kubakhiqizi abahlukahlukene. Lawa ngamahlebezi ayiziwula, angaqinisekiswa lutho. Jabulela impilo ngenkathi uthola i-insulin enhle engenisiwe mahhala. Uma kufanele ushintshele kwezasekhaya, khona-ke usazokhumbula lezi zikhathi nge-nostalgia. Mayelana nokuthi "kube nzima kakhulu kimi ukunxephezela isifo sikashukela." Shintshela ekudleni okuphansi kwe-carbohydrate bese ulandela yonke eminye imisebenzi echazwe kuhlelo lwethu sikashukela wohlobo 1. Ngincoma ngokujova uLantus okungenani kabili ngosuku, ekuseni nakusihlwa, hhayi kanye, njengoba wonke umuntu ethanda ukwenza.
Ngizoba sendaweni yakho, ngakolunye uhlangothi, ngigwaze ngenkuthalo uLantus, futhi kabili ngosuku, hhayi ebusuku kuphela. Kulokhu, ungazama ukukwenza ngaphandle kwemijovo ye-Apidra. Shintshela ekudleni okuphansi kwe-carbohydrate bese ulandela yonke eminye imisebenzi njengoba ichaziwe kuhlelo lohlobo 2 lwesifo sikashukela. Yenza inani lokuzihlola ushukela wegazi izikhathi ezi-1-2 ngesonto. Uma ulandela ngokucophelela ukudla, thatha imishanguzo yesifo sikashukela sohlobo 2, futhi nangokwenza njalo ukuzivocavoca umzimba ngenjabulo, khona-ke ngamathuba angama-95% ongawenza ngaphandle kwemijovo ye-insulin. Uma ngaphandle koshukela ushukela wakho usazohlala ungaphezu kokwejwayelekile, bese ujuba uLantus kuqala. Ukufakwa kwama-insulin okusheshayo ngaphambi kokudla okunesifo sikashukela sohlobo 2 kuyadingeka kuphela ezimweni ezinzima kakhulu, uma isiguli sinobuvila kakhulu ukulandela ukudla okune-carbohydrate futhi ngokujwayelekile sinamathela kulolo hlobo.
Funda i-athikili "I-Insulin Injection Technique". Prakthiza kancane - futhi ufunde ukuthi ungawenza kanjani lomjovo ngokungenabuhlungu. Lokhu kuzoletha impumuzo ebalulekile kuwo wonke umndeni wakho.
Yebo, kunjalo. Ngaphezu kwalokho, kufanele uthenge ngisho neLantus noma i-Levemir ngemali yakho, esikhundleni sokusebenzisa "isilinganiso" samahhala "protafan." Kungani - kuxoxwe ngemininingwane engenhla.
I-Neuropathy, unyawo lwesifo sikashukela nezinye izinkinga kuncike ekutheni ukuphatha kanjani ukugcina ushukela wegazi lakho usondele kwelejwayelekile. Hlobo luni lwe-insulin olusebenzisayo alunandaba uma lusiza ukunxephezela kahle ushukela. Uma ushintsha usuka ku-protafan uye e-Levemir noma kwi-Lantus njenge-insulin enwetshiwe, lapho-ke ukuthatha ukulawula ushukela kuba lula. Isifo sikashukela siqede izinhlungu nezinye izimpawu ze-neuropathy - lokhu kungenxa yokuthi bathuthukise ushukela wegazi. Futhi izinhlobo ezithile ze-insulin azihlangene nalokhu. Uma ukhathazekile nge-neuropathy, khona-ke funda i-athikili nge-alpha lipoic acid.
Ngokuzama imijovo ye-insulin enwetshiwe, ungathuthukisa ushukela wakho ekuseni esiswini esingenalutho. Uma udla ukudla “okunokulinganisela”, okugcwele ama-carbohydrate, lapho-ke kufanele usebenzise imithamo emikhulu yeLevemir. Kulesi simo, zama umthamo wakusihlwa wokukhishwa ngo-22.00-00.00. Lapho-ke inani eliphakeme lesenzo salo lizoba ngo-5.00-8.00 ekuseni, lapho umcimbi wokukhanya kokusa ubonakaliswa ngangokunokwenzeka. Uma ushintshele ekudleni okune-carbohydrate ephansi futhi nemithamo yakho yeLevemir iphansi, kunconyelwa ukushintshela emijozweni emi-3 noma ngisho ne-4 ngosuku kusuka ekuphathweni okwenziwa isikhathi se-2. Ekuqaleni, lokhu kuyinselele, kepha usheshe wakujwayela, futhi ushukela wasekuseni uqala ukujabulisa wena.
Odokotela bakho kusobala ukuthi abanaso isizatho. Uma eminyakeni emi-4 ungakathuthukisi ukungezwani ne-insulin, khona-ke akulindelekile ukuthi ingavele kungazelelwe. Ngidonsela ukunaka kokulandelayo. Ukudla okuphansi kwe-carbohydrate sikashukela akugcini ngokuthuthukisa ushukela wegazi, kepha futhi kunciphisa amathuba okuthi kuthiwe angabi khona.Ngoba cishe yonke imikhiqizo engadala i-allergies, siyikhipha ekudleni, ngaphandle kwamaqanda enkukhu.
Cha, akulona iqiniso. Kwakunamahlebezi okuthi uLantus uvusa umdlavuza, kepha awukaqinisekiswa. Zizwe ukhululekile ukushintsha usuka ku-protafan uye ku-Levemir noma uLantus - ama-insulin anwebekayo. Kunezizathu ezincane zokuthi kungani kungcono ukukhetha iLevemir kuneLantus. Kepha uma uLantus enikezwa mahhala, kepha uLevemir - cha, ke uthulule i-insulin yamahhala esezingeni eliphakeme. Qaphela Sincoma ukujova iLantus amahlandla amabili kuya kwamathathu ngosuku, hhayi kanye.
Awukhombisi ubudala bakho, ubude, isisindo, uhlobo lwesifo sikashukela nobude besikhathi ngeze. Azikho izincomo ezicacile zombuzo wakho. Ungahlukanisa amayunithi ayi-15 ngesigamu. Noma yehlisa umthamo ophelele ngamayunithi angama-1-2 bese usuhlukanise phakathi. Noma ungakhipha kusihlwa kusihlwa kunasekuseni ukuze unciphise into yokuqala yokusa. Konke lokhu kukodwa. Yenza ukuzithiba ngokuphelele koshukela wegazi futhi uqondiswe yimiphumela yako. Kunoma ikuphi, ukushintshwa kusuka kumjovo owodwa weLantus ngosuku kuya kwemibili kulungile.
Akunampendulo ecacile embuzweni wakho. Yenza ukuzithiba ngokuphelele koshukela wegazi futhi uqondiswe yimiphumela yako. Le ukuphela kwendlela yokukhetha ngokunembile imithamo ye-insulin enwetshiwe futhi esheshayo. Ngikuncoma ukuthi uxoxisane nabazali bezingane ezineminyaka engu-6 ubudala ezinesifo sikashukela sohlobo 1. Bakwazi ukweqa ngokuphelele i-insulin ngemuva kokushintshela ekudleni okufanele.
I-insulin ehlala isikhathi eside, okungeleLevemir, ayihloselwe ukwehlisa ushukela wegazi ngokushesha. Inhloso yokusetshenziswa kwayo ihlukile ngokuphelele. Ushukela esimweni sakho ukhuphuka ngaphansi kwethonya lokudla osanda kudliwa. Lokhu kusho ukuthi umthamo we-insulin esheshayo ngaphambi kokudla awukhethwe kahle. Futhi, kungenzeka kakhulu, isizathu esiyinhloko ukudla ukudla okungafanele. Funda uhlelo lwethu lwesifo sikashukela sohlobo 1 noma Uhlelo 2 Sikashukela. Ngemuva kwalokho, funda ngokucophelela zonke izindatshana ezikukholamu ye-Insulin.
I-insulin enwetshiwe ngohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela: okutholakele
Ku-athikili, ufunde ngokuningiliziwe ukuthi uLantus noLevemir, i-insulin eyengeziwe, kanye ne-NPH-insulin protafan eyisilinganiso. Sithole ukuthi kungani kufanelekile ukusebenzisa imijovo ye-insulin enwetshiwe ebusuku nasekuseni, futhi ngasiphi isizathu kungalungile. Into esemqoka edinga ukufundwa: i-insulin eyengeziwe esebenza njenge-insulin igcina ushukela wegazi ojwayelekile. Akuhloselwe ukukhipha igxuma ushukela ngemuva kokudla.
Ungazami ukusebenzisa i-insulin enwetshiwe lapho kudingeka khona iDemo noma i-Ultra iDemo. Funda izindatshana “Ultrashort Insulin Humalog, NovoRapid ne-Apidra. I-Insulin Emfishane Yabantu ”kanye“ Nokufakwa kwe-insulin ngokushesha ngaphambi kokudla. Ungawehlisela kanjani ushukela ube yinto ejwayelekile uma ugxuma. " Phatha kahle ushukela wakho nge-insulin uma ufuna ukugwema ubunzima bawo.
Sibheke ukuthi singabalwa kanjani isilinganiso esifanele se-insulin enwetshiwe ebusuku nasekuseni. Izincomo zethu zehlukile kulokho okulotshwe ezincwadini ezidumile nalokho okufundiswa “esikoleni sikashukela”. Ngosizo lokuzihlola ngokucophelela ushukela wegazi, qiniseka ukuthi izindlela zethu zisebenza kahle, zidla isikhathi. Ukubala nokulungisa umthamo we-insulin enwetshiwe ekuseni, kufanele weqe ibhulakufesi nangelantshi. Lokhu akukubi kakhulu, kepha, yeha, indlela engcono ayikho. Ukubala nokulungisa umthamo we-insulin enwetshiwe ebusuku kulula, ngoba ebusuku, lapho ulele, awudli noma ngabe yikuphi.
I-insulin eyengeziwe ye-insulin, i-Levemir ne-protafan ziyadingeka ukugcina ushukela ojwayelekile esiswini esingenalutho usuku.
I-Ultrashort ne-insulin emfushane - qeda ushukela owandayo owenzeka ngemuva kokudla.
Ungazami ukusebenzisa imithamo ephezulu ye-insulin enwetshiwe esikhundleni sokujova okusheshayo kwe-insulin ngaphambi kokudla!
Yikuphi i-insulin okungcono - uLantus noma uLevemir? Impendulo: Levemir inezinzuzo ezincane.Kepha uma uthola uLantus mahhala, mthinte ngokuthula.
Kuhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2, thayipha kuqala i-insulin ebusuku kanye / noma ekuseni, bese ubamba i-insulin ngaphambi kokudla, uma kunesidingo.
Kungcono ukuthi ushintshe usuka ku-protafan uye eLantus noma kuLevemir, noma ngabe kufanele uthenge i-insulin entsha ngemali yakho.
Ngemuva kokushintshela ekudleni okuphansi kwe-carbohydrate yohlobo 1 noma 2 sikashukela, imithamo yazo zonke izinhlobo ze-insulin incishiswa izikhathi ezi-2-7.
Le ndatshana inikezela ngemiyalo yezinyathelo nezinyathelo yokuthi ungabalwa kanjani umthamo we-insulin enwetshiwe ebusuku nasekuseni. Bahlole!
Kunconywa ukuthatha umjovo owengeziwe weLantus, Levemir noma iProtafan ngo-1-3 a.m. ukuze ulawule kahle umcimbi wokusa wokusa.
Isifo sikashukela, esidla amahora ama-4-5 ngaphambi kokulala futhi sifake i-insulin eningi ngo-1-3 ekuseni, sinoshukela ojwayelekile ekuseni esiswini esingenalutho.
Ngiyethemba ukuthi le ndatshana ibe wusizo kuwe. Uma kungenzeka, kungakuhle ukuthi ungene esikhundleni se-NPH-insulin (protafan) evamile ngeLantus noma Levemir ukuze uthuthukise imiphumela yokwelashwa kwesifo sikashukela. Kumazwana, ungabuza imibuzo mayelana nokwelapha isifo sikashukela ngezinhlobo ezandisiwe ze-insulin. Ukuphathwa kwesiza kuyashesha ukuphendula.
I-Insulin Humulin: ukubuyekezwa, imiyalo, kubiza malini umuthi
Ku-1 ml. Umuthi i-Humulin Humulin uqukethe i-100 IU ye-insulin esebenza ngabantu. Izithako ezisebenzayo zingama-insulin angama-30% i-insulin.
Njengoba kusetshenziswa izakhi ezisizayo:
Izinkomba zokusetshenziswa nemiphumela emibi
Isifo sikashukela mellitus, lapho kunconywa ukwelashwa kwe-insulin.
Isifo sikashukela sokutholwa (isifo sikashukela sabesifazane abakhulelwe).
Imvamisa phakathi nokwelashwa ngamalungiselelo e-insulin, kufaka phakathi uHumulin M3, ukuthuthukiswa kwe-hypoglycemia kuyabonakala. Uma inefomu elinzima, ingavusa ikhehla le-hypoglycemic (ukudangala nokulahlekelwa ukwazi) futhi kungaholele ekufeni kwesiguli.
Kwezinye iziguli, kungavela ukungezwani komzimba, kuboniswe ukulunywa kwesikhumba, ukuvuvukala kanye nokubomvu endaweni yomjovo. Imvamisa, lezi zimpawu ziphela zingedwa ezinsukwini ezimbalwa noma amasonto ngemuva kokuqala kokwelashwa.
Kwesinye isikhathi lokhu akuhlangene nokusetshenziswa kwomuthi uqobo, kepha kuwumphumela wethonya lezinto zangaphandle noma umjovo ongalungile.
Kukhona ukubonakaliswa komzimba okuphathelene nemvelo ehlelekile. Zenzeka kaningi kakhulu, kepha zimbi kakhulu. Ngokuphendula okunjalo, okulandelayo kwenzeka:
kwehle umfutho wegazi
Ezimweni ezinzima kakhulu, ukungezwani komzimba kungaba yingozi empilweni yesiguli futhi kudinga usizo oluphuthumayo lwezokwelapha. Kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi kufakwe i-insulin esikhundleni noma desensitization.
Lapho usebenzisa i-insulin yezilwane, ukumelana, i-hypersensitivity to the drug, noma i-lipodystrophy ingaqala ukukhula. Lapho unquma i-insulin Humulin M3, amathuba emiphumela enjalo acishe abe yi-zero.
I-insulin ye-Humulin M3 ayivunyelwe ukuphathwa ngokuhlinzwa.
Lapho unquma i-insulin, umthamo nendlela yokuphatha ingakhethwa kuphela ngudokotela. Lokhu kwenziwa ngokukodwa esigulini ngasinye, kuye ngezinga le-glycemia emzimbeni wakhe. I-Humulin M3 yenzelwe ukuphatha ngokungahambi kahle, kepha futhi ingalawulwa nge-intramuscularly, i-insulin iyakuvumela lokhu. Kunoma ikuphi, onesifo sikashukela kufanele azi ukuthi angayifaka kanjani insulin.
Ngokuzenzakalelayo, umuthi ufakwa esiswini, ethangeni, ehlombe noma entanjeni. Endaweni efanayo umjovo unganikezwa kungabikho kanye ngenyanga.Ngesikhathi senqubo, kuyadingeka ukusebenzisa imishini yokujova kahle, ukuvikela inaliti ingangeni emithanjeni yegazi, hhayi ukwenza indawo yomjovo ngemuva komjovo.
I-Humulin M3 ingxube eyenziwe ngomumo eyenziwe eneHumulin NPH neHumulin Regular. Lokhu kwenza ukuthi kungalungiswa isixazululo ngaphambi kokulungiselela isiguli uqobo.
Ukulungiselela i-insulin yokujova, i-vial noma i-cartridge yeHumulin M3 NPH kufanele idonswe amahlandla ayi-10 ezandleni zakho, futhi, iphenduke ama-degrees angama-180, ivele inyakaze kancane isuka ngapha nangapha. Lokhu kumele kwenziwe kuze kube yilapho ukumiswa kufana nobisi noma kube yisiyisi esinamafu, nesiwumfaniswano.
Ukunyakazisa i-insulin nge-insulin akusetshenziswa akunconywa, ngoba lokhu kungaholela ekubukekeni kwegwebu kuphazamise umthamo ngqo. Ungasisebenzisi isidakamizwa ngesigaqa noma ngesikhafu esenziwe ngemuva kokuxubana.
Ukujova umuthi ngendlela efanele, kufanele uqale wenze izinqubo ezithile zokubekwa kuqala. Okokuqala udinga ukuthola indawo yomjovo, geza izandla zakho kahle bese usula le ndawo ngendwangu efakwe otshwaleni.
Ngemuva kwalokho udinga ukukhipha i-cap yokuvikela kusuka kunaliti yesirinji, ulungise isikhumba (uselule noma usincine), ufake inaliti futhi wenze umjovo. Ngemuva kwalokho inaliti kufanele isuswe futhi imizuzwana embalwa, ngaphandle kokuhlikihla, cindezela indawo yomjovo nge-napkin. Ngemuva kwalokho, ngosizo lwe-cap yangaphandle evikelayo, udinga ukukhulula inaliti, uyisuse bese uyibuyisela imbumbulu epeni lesirinji.
Awukwazi ukusebenzisa inaliti yepeni yesirinji efanayo. I-vial noma i-cartridge isetshenziswa ize ingenalutho ngokuphelele, bese ilahlwa. Amapeni wesirinji enzelwe ukusetshenziswa komuntu ngamunye.
I-Humulin M3 NPH, njengezinye izidakamizwa kuleli qembu lezidakamizwa, ayinayo nencazelo efanelekile yokusetshenziswa ngokweqile, ngoba izinga le-glucose esegazini le-serum lincike ekuxhumaneni okuhleliwe phakathi kwenqubo ye-glucose, i-insulin nezinye izinqubo ze-metabolic. Kodwa-ke, i-overulin ye-insulin ingaba nemiphumela emibi kakhulu.
I-Hypoglycemia iba ngumphumela wokungaboni ngasolinye phakathi kokuqukethwe kwe-insulin ku-plasma nezindleko zamandla kanye nokudla.
Izimpawu ezilandelayo ziyimpawu ye-hypoglycemia evela:
Kwezinye izimo, ngokwesibonelo, ngomlando omude wesifo sikashukela noma ukuqapha kwawo osondelene, izimpawu ze-hypoglycemia zokuqalisa zingashintsha. I-hypoglycemia emnene ingavinjelwa ngokuthatha ushukela noma ushukela. Kwesinye isikhathi kungadingeka ukuthi uguqule umthamo we-insulin, ubuyekeze lokho kudla noma ushintshe ukusebenza komzimba.
I-hypoglycemia elinganiselayo ivame ukuphathwa ukuphathwa kwe-glucagon e-subcutaneous or intramuscular Ezimweni ezimbi kakhulu, lapho kukhona ukuphazamiseka kwemizwa, ukweqiwa noma i-coma, ngaphezu komjovo we-glucagon, ukugxila kwe-glucose kumele kuphathwe ngokuhlinzwa.
Esikhathini esizayo, ukuvikela ukubuyela emuva kwe-hypoglycemia, isiguli kufanele sidle ukudla okune-carbohydrate eningi. Izimo ze-hypoglycemic ezinzima kakhulu zidinga ukulaliswa esibhedlela esiphuthumayo.
Ukusebenzelana kwezidakamizwa NPH
Ukusebenza kweHumulin M3 kukhuliswa ngokuthatha izidakamizwa zomlomo ze-hypoglycemic, i-ethanol, i-salicylic acid derivatives, i-monoamine oxidase inhibitors, i-sulfonamides, i-ACE inhibitors, i-angiotensin II receptor blockers, i-beta-blockers engakhethi.
Izidakamizwa ze-Glucocorticoid, ama-hormone okukhula, izithiyo zokuvimbela inzalo ngomlomo, i-danazole, ama-hormone egilo, i-thiazide diuretics, i-beta2-sympathomimetics iholela ekunciphiseni komthelela we-hypoglycemic we-insulin.
Qinisa noma, ngakolunye uhlangothi, yenza buthaka ukuncika kwe-insulin ekwazi i-lancreotide namanye ama-analogues we-somatostatin.
Izimpawu ze-hypoglycemia zithanjiswa ngenkathi kuthathwa i-clonidine, i-reserpine ne-beta-blockers.
Imibandela yokuthengisa, isitoreji
IHumulin M3 NPH itholakala ekhemisi kuphela ngomuthi odingekayo.
Umuthi kumele ugcinwe emazingeni okushisa angama-2 kuye kwangama-8 degrees, ungabi yiqhwa futhi uvezwe ukukhanya kwelanga nokushisa.
I-VPH ye-insulin evulekile ingagcinwa emazingeni okushisa angama-15 kuye kwangama-25 izinsuku ezingama-28.
Ngokuya ngaphansi kwezimo zokushisa ezidingekayo, ukulungiselela kwe-NPH kugcinwa iminyaka emi-3.
Ukuyekiswa okungagunyaziwe kokwelashwa noma ukuqokwa kwemithamo engeyona (ikakhulukazi yeziguli ezincike kuma-insulin) kungaholela ekwakhiweni kwe-ketoacidosis noma i-hyperglycemia, ebeka engcupheni impilo yesiguli.
Kwabanye abantu, lapho besebenzisa i-insulin yabantu, izimpawu ze-hypoglycemia esetshenziswayo zingahluka kwezimpawu zobulongwe be-insulin yezilwane, noma zingaba nezimpawu ezibucayi.
Isiguli kufanele sazi ukuthi uma izinga leglucose legazi lijwayelekile (ngokwesibonelo, ngokwelashwa okuqinile kwe-insulin), khona-ke izimpawu eziphakamisa ukuthi i-hypoglycemia engenayo inganyamalala.
Lezi zimpawu zingaba buthakathaka noma zibonakale ngokuhlukile uma umuntu ethatha i-beta-blockers noma enesifo sikashukela esigcina isikhathi eside, kanye nokuba khona kwesifo sikashukela sesifo sikashukela.
Uma i-hyperglycemia, njenge-hypoglycemia, ingalungiswa ngesikhathi, lokhu kungaholela ekulahlekelweni yimizwa, ukukhohlisa, nokufa imbala.
Ukushintshwa kwesiguli kwamanye amalungiselelo e-insulin ye-insulin noma izinhlobo zawo kufanele kwenziwe kuphela ngaphansi kokuqondisa udokotela. Ukuguqula i-insulin ibe isidakamizwa esinomsebenzi ohlukile, indlela yokukhiqiza (iDNA recombinant, isilwane), izinhlobo (ingulube, i-analog) ingadinga ukuphuthumayo noma, ngokuphambene nalokho, ukulungiswa okubushelelezi kwemithamo enqunyelwe.
Ngezifo zezinso noma isibindi, ukungasebenzi okwanele kwesimo sezinsini, ukusebenza okungasebenzi kahle kwezindlala ze-adrenal kanye ne-gland yegilo, isidingo sesiguli se-insulin singancipha, futhi ngokucindezela okukhulu ngokomzwelo nezinye izimo, ngakolunye uhlangothi, siyanda.
Isiguli kufanele ngaso sonke isikhathi sikhumbule amathuba okukhula kwe-hypoglycemia futhi sihlole ngokwanele isimo somzimba wakhe lapho ushayela imoto noma isidingo somsebenzi esiyingozi.
IMonodar (K15, K30, K50),
I-Novomix 30 Flexspen,
Umxube weHumalog (25, 50).
I-Gensulin M (10, 20, 30, 40, 50),
I-Farmasulin H 30/70,
IMikstard 30 NM
Uma owesifazane okhulelwe enesifo sikashukela, ngakho-ke kubaluleke kakhulu kuye ukulawula i-glycemia. Ngalesi sikhathi, ukufunwa kwe-insulin kuvame ukuguquka ngezikhathi ezahlukene. Kwi-trimester yokuqala, iwa, futhi ekhuphukeni kwesibili neyesithathu, ngakho-ke ukulungiswa kwamthamo kungadingeka.
Futhi, ushintsho kumthamo, ukudla kanye nokuzivocavoca komzimba kungadingeka ngesikhathi sokuqunjelwa.
Uma lokhu kulungiswa kwe-insulin kufanelekile ngokuphelele esigulini esinesifo sikashukela, ke ukubuyekezwa ngeHumulin M3, njengomthetho, kuyakhanya. Ngokusho kweziguli, lesi sidakamizwa sisebenza kakhulu futhi empeleni asinayo imiphumela emibi.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi kuyenqatshelwe ngokuphelele ukuthi unikeze i-insulin ngokwakho, kanye nokuyiguqula kwenye.
Ibhodlela elilodwa leHumulin M3 elinomthamo wezindleko ezingama-10 ml kusuka kuma-ruble angama-500 kuye kwangama-600, iphakethe lama-cartridge amahlanu ama-3 ml kuhla lwama-ruble ayi-1000 kuya kwangama-ruble.
Ukwakheka kwalesi sidakamizwa kufaka phakathi isixazululo esimsulwa sama-hormone, esingaqukethe noma yiziphi izengezo ezandisa umthelela wazo emzimbeni. Iqembu labasebenza ngokufakelwa okufushane lisebenza ngokushesha kunabanye, kepha ubude bokusebenza kwabo bufushane.
Umuthi we-intramuscular uyatholakala ezimpondweni zeglasi ezivalelwe, zivalwe ngezithinteli nge-aluminium processing.
Umphumela we-insulin emfushane emzimbeni uhambisana:
ukucindezela noma ukukhuthaza ama-enzyme athile,
kusebenze kokuqalwa kwe-glycogen ne-hexokinase,
ukucindezelwa kwe-lipase activating fatty acids.
Izinga lokukhuphuka kanye ne-biosynthesis kuya ngesibalo se-glucose esegazini. Ngokwanda kwezinga layo, izinqubo zokukhiqizwa kwe-insulin kumaphenti ziyanda, futhi, ngakolunye uhlangothi, ngokwehla kokuxineka, ukugcinwa kokubeletha kwehla kancane.
Ukuhlukaniswa Okufushane kwe-Insulin
Ngokusho kwezici zesikhathi se-insulin esebenza ngokubambezelayo yile:
Amafushane amafushane (anyibilikayo, alawula) - enza emva kokuphatha ngemuva kwengxenye yehora, ngakho-ke anconyelwa ukusetshenziswa emaminithini angama-40-50 ngaphambi kokudla. Iqoqo eliphakeme lezinto ezisebenzayo ekusakazweni kwegazi lifinyelelwa ngemuva kwamahora ama-2, kuthi ngemuva kwamahora ayi-6 kuphela umuthi womuthi uhlale emzimbeni. Ukufakwa okufushane kufaka phakathi i-soluble yomuntu eyakhelwe izakhi zofuzo, ingulube engumbala womuntu ne-monocomponent engulube.
I-Ultrashort (ehambelana nomuntu, i-analog) ifakwa - iqala ukuthinta umzimba ngemuva kokuphathwa ngemuva kwemizuzu eyi-15. Umsebenzi we-Peak uphinde utholwe ngemuva kwamahora ambalwa. Ukuqedwa ngokuphelele emzimbeni kwenzeka ngemuva kwamahora ama-4. Ngenxa yokuthi i-insulin ye-ultrashort inomphumela omningi ngokwengeziwe womzimba, amalungiselelo lapho atholakala khona asetshenziswa imizuzu emi-5 ukuya kwangaphambi kokudla noma ngokushesha ngemuva kokudla. Lolu hlobo lwesidakamizwa lungafaka i-aspart insulin kanye nama-analog enzym zokwenziwa kwe-insulin yomuntu.
I-insulin emfushane ekwelapheni isifo sikashukela
I-insulin yesifo sikashukela isiza ukuvimbela ukukhula kwezinkinga, yelula impilo yesifo sikashukela futhi ithuthukise ikhwalithi yayo. Futhi, imijovo yalesi sidakamizwa inciphisa umthwalo kumanyikwe, okunomthelela ekubuyiselweni okuyingxenye kwamaseli we-beta.
Umphumela ofanayo ungatholakala ngesifo sikashukela sohlobo 2 ngokuqaliswa okuyikho kohlelo lokwelashwa futhi ulandele irekhodi elinconywe udokotela. Ukubuyiselwa kwamaseli e-Beta kungenzeka futhi ngesifo sikashukela sohlobo 1 kuphela uma kwenziwa ukuxilongwa okufika ngesikhathi futhi izindlela zokwelashwa zithathwa ngaphandle kokulibala.
Yini okufanele abanesifo sikashukela babe nayo? Bheka imenyu yethu ezilinganiselayo masonto onke manje!
Imvamisa, umuthi uphathwa nge-intramuscularly noma ngokunqenqemeni nge-syringe eklanyelwe ngokukhethekile i-insulin. Kutholakala kuphela lapho unesibindi sikashukela, ukuphathwa okuphathelene nomuthi okuvunyelwe. Umthamo ukhethiwe ngamunye, kucatshangelwa ubunzima besifo, izinga loshukela emzimbeni kanye nesimo jikelele sesiguli.
Ukusabela Okubi Nokuxhunyaniswa
Ukuphendula okuyinhloko ngemuva kokuphathwa kwe-ejenti ye-hormonal kwenzeka lapho izincomo zemithamo zingalandelwa. Lokhu kuhambisana nokwanda okukhulu kwe-insulin emfuleni wegazi.
Imiphumela emibi ejwayelekile ibandakanya:
Ezimweni ezinzima kakhulu zokunyuka okubucayi kwe-hormone esegazini (uma kungekho ukuphathwa okufika ngesikhathi kwama-carbohydrate), ukukhohliswa kungahle kwenzeke, kuhambisane nokuphelelwa yithemba nethonya le-hypoglycemic.
Amalungiselelo amafushane we-insulin
Zonke izidakamizwa eziqukethe ama-insulin amafushane omuntu noma izifaniso zazo zinezimpawu ezifanayo. Ngakho-ke, uma kunesidingo, zingashintshwa, zibheka imithamo efanayo, ngokubonisana nodokotela kwangaphambilini kuyadingeka. Ngakho-ke, ukukhethwa okuncane kwamagama e-insulin abambela futhi enza ngokushesha
Indlela yokusebenza ye-insulin Humulin NPH
Umphumela we-pharmacological ukwehla kwe-glucose yegazi ngenxa yokuthathwa kwalo okuthe xaxa kumaseli nezicubu ezisebenzisa uHumulin NPH. Ku-mellitus yesifo sikashukela, ukukhiqizwa kwe-pancreatic insulin hormone kuyancipha, okudinga ukwelashwa kwe-hormone. Umuthi ukhulisa ukusetshenziswa kwe-glucose ngamaseli adinga umsoco. I-insulin ixhumana nama-receptors akhethekile ebusweni beseli, evusa izinqubo eziningi ze-biochemical, ezibandakanya, ikakhulukazi, ukwakheka kwe-hexokinase, i-pyruvate kinase, i-glycogen synthetase. Ukuhanjiswa kwe-glucose kwezicubu kusuka egazini kuyakhuphuka, lapho iba yingcosana.
Umphumela wokwelapha uqala ihora ngemuva komjovo.
Umphumela wehlisela ushukela uthatha cishe amahora angama-18.
Umphumela omkhulu kakhulu ngemuva kwamahora we-2 kuze kube amahora angama-8 kusukela esikhathini sokuphatha.
Ukuhlukahluka okunjalo esikhathini sokusebenza komuthi kuncike endaweni yokuphathwa kokumiswa nomsebenzi wezimoto wesiguli. Lezi zakhiwo kufanele zibhekwe lapho kunikezwa irejimeni yemithamo kanye nemvamisa yokuphatha. Ngokunikezwa kokuqala komphumela, uHumulin NPH ubekwe kanye ne-insulin emfushane ne-ultrashort.
Ukusatshalaliswa kanye nokuphuma emzimbeni kusuka emzimbeni:
I-Insulin Humulin NPH ayingene ekuvinjelweni kwe-hematoplacental futhi ayikhishwa emithanjeni yezilwane ezincelisayo ngobisi.
Kwenziwe engangeni esibindini nezinso ngokusebenzisa i-insulinase ye-enzyme.
Ukuqeda umuthi ikakhulukazi ezinso.
Ukusabela okuhle okungafuneki kufaka phakathi:
I-hypoglycemia iyinkimbinkimbi eyingozi engenayo i-dosing enganele. Kuboniswa ngokulahlekelwa ukwazi, okungadidaniswa ne-hyperglycemic coma,
ukubonakaliswa komzimba endaweni yokujova (ubomvu, ukulunywa, ukuvuvukala),
lipodystrophy - atrophy yendawo yamafutha angaphansi.
Imithetho ejwayelekile yokusetshenziswa
Umuthi kufanele uphathwe ngaphansi kwesikhumba sehlombe, okhalweni, ama-buttocks noma odongeni lwangaphakathi lwesisu, futhi kwesinye isikhathi umjovo we-intramuscular nawo kungenzeka.
Ngemuva komjovo, akufanele ucindezele ngokuqinile futhi wenze indawo yokuhlasela.
Kuyenqatshelwa ukusebenzisa umuthi ngentambo.
Umthamo ukhethwa ngamunye yi-endocrinologist futhi ususelwa emiphumeleni yokuhlolwa kwegazi ushukela.
I-algorithm yokulawulwa kwe-insulin uHumulin NPH
I-Humulin ezimpondweni ngaphambi kokusetshenziswa kumele ixutshwe ngokugoqa i-vial phakathi kwezandla kuze kuvele umbala wobisi. Musa ukuthuthumela, igwebu, noma usebenzise i-insulin ensalela ensalela ezindongeni ze-vial.
I-Humulin NPH kumakherubhi hhayi nje ukuhambisa phakathi kwezintende, ukuphinda ukunyakaza amahlandla ayi-10, kodwa futhi nokuxubana, ukuguqula ngobunono i-cartridge. Qinisekisa ukuthi i-insulin ilungele ukuphathwa ngokuhlola ukuvumelana nombala. Kufanele kube nokuqukethwe okufanayo ngombala wobisi. Futhi musa ukushukumisa noma ukuthoba umuthi. Musa ukusebenzisa ikhambi nge-cereal noma sediment. Amanye ama-insulin awakwazi ukufakwa kwi-cartridge futhi awakwazi ukugcwaliswa futhi.
Ipeni lesirinji liqukethe i-3 ml ye-insulin-isophan ngethamo le-100 IU / ml. Ngomjovo owodwa, faka akukho ngaphezu kwe-60 IU. Idivayisi ivumela i-dosing ngokunemba okungafika ku-1 IU. Qiniseka ukuthi inaliti inamathele ngokuqinile kudivayisi.
- Geza izandla usebenzisa insipho, ubaphathe nge-antiseptic.
- Nquma esizeni somjovo bese welapha isikhumba ngesisombululo se-antiseptic.
- Enye indawo yokujova ukuze indawo efanayo isetshenziswe kungabi njalo ngenyanga.
Izici zokusetshenziswa kwensimbi yepeni yesirinji
Susa ikepisi ngokuyikhipha kunokuba uyijikele.
Hlola i-insulin, impilo yeshalofu, ukuthungwa nombala.
Lungisa inaliti yesirinji njengoba kuchaziwe ngenhla.
Skena inaliti uze uqine.
Susa izimbotshana ezimbili ngenaliti. Ngaphandle - ungalahli.
Hlola ukuphuza i-insulin.
Ukugoqa isikhumba nokufaka inaliti ngaphansi kwesikhumba engela kwama-degree angama-45.
Yethula i-insulin ngokubamba inkinobho ngesithupha sakho ize ime, ibala kancane ngokwengqondo ukuya ku-5.
Ngemuva kokususa inaliti, beka ibhola lotshwala endaweni yomjovo ngaphandle kokuhlikihla noma ukuchoboza isikhumba. Imvamisa, iconsi le-insulin lingahlala esicongweni senaliti, kepha hhayi ukuvuza kulo, okusho ukuthi umthamo ophelele.
Vala inaliti nge-cap yangaphandle bese uyilahla.
Ukusebenzisana okungaba khona nezinye izidakamizwa
Izidakamizwa ezikhulisa umphumela weHumulin:
amaphilisi anciphisa ushukela,
ama-antidepressants - ama-monoamine oxidase inhibitors,
izidakamizwa ze-hypotonic ezivela eqenjini le-ACE inhibitors nabavimbeli be-beta,
i-carbonic anhydrase inhibitors,
izidakamizwa eziqukethe utshwala.
Izidakamizwa ezivimbela isenzo se-insulin ye-insulin:
ama-ejenti enza uhlelo lwezinzwa luzwele,
izivimbi zesiteshi se-calcium,
Analogs of Humulin
Igama lokuhweba Umkhiqizi
I-Insuman Bazal Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, (Germany)
I-Protafan I-Novo Nordisk A / S, (eDenmark)
I-Berlinsulin N Basal U-40 ne-Berlisulin N Basal pen I-Berlin-Chemie AG, (eJalimane)
I-Actrafan HM I-Novo Nordisk A / O, (eDenmark)
Br-Insulmidi ChSP I-Bryntsalov-A, (Russia)
Humodar B I-Indar Insulin CJSC, (Ukraine)
I-Isofan Insulin World Cup I-AI CN Galenika, (Yugoslavia)
Homofan I-Pliva, (eCroatia)
I-Biogulin NPH I-Bioroba SA, (eBrazil)
Ukubuyekezwa kwezidakamizwa ze-insulin-isophan antidiabetic:
Bengifuna ukwenza ukulungisa - kwenqatshelwe ukuphatha i-insulin isikhathi eside ngomuthi!
Namuhla, igama elithi Humulin lingabonakala emagameni emithi eminingana eklanyelwe ukunciphisa ushukela wegazi - uHumulin NPH, MoH, Regular and Ultralent.
Umehluko kwendlela yokwenza lezi zidakamizwa uhlinzeka ukwakheka ngakunye kokunciphisa ushukela ngezimpawu zalo. Lokhu kucatshangelwa lapho kunqunywa ukwelashwa kwabantu abanesifo sikashukela. Ngaphezu kwe-insulin (isakhi esiyinhloko, esilinganiswa ku-IU), umuthi uqukethe izimbotshana ezinjengoketshezi oyinyumba, ama-protamines, i-carbolic acid, i-metacresol, i-zinc oxide, i-sodium hydroxide, njll.
I-pancreatic hormone ifakwe emigqonyeni yama-cartridge, ama-vials kanye nesibaya sesirinji. Imiyalo enamathiselwe yazisa ngezici zokusetshenziswa kwezidakamizwa zesintu. Ngaphambi kokusetshenziswa, ama-cartridge, kanye nezimbiza akumele kugungqiswe ngamandla; Elula kakhulu ukusetshenziswa ngabanesifo sikashukela ipeni lesirinji.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezishiwo kuvumela ukufeza ukwelashwa okuphumelelayo kweziguli ezinesifo sikashukela, ngoba zinegalelo ekubuyiselweni kokushoda okuphelele nokuhlobene kwe-hormone ye-pancreas. Nquma u-Himulin (umthamo, irejimeni) kufanele ube yi-endocrinologist. Ngokuzayo, uma kunesidingo, udokotela ohambelayo angalungisa irejimeni yokwelashwa.
Esikhathini sikashukela sohlobo lokuqala, i-insulin ibekelwe umuntu impilo yonke. Ngokufakwa ngamandla kwesifo sikashukela sohlobo 2, esihambisana nenkinga enkulu yokwembiwa kwengqondo, ukwelashwa kwakhiwa kusuka kwizifundo ezahlukahlukene. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ngesifo esidinga ukuthi kungeniswe i-hormone yokufakelwa emzimbeni, awukwazi ukwenqaba ukwelashwa nge-insulin, ngaphandle kwalokho imiphumela emibi ayinakugwenywa.
Izindleko zezidakamizwa zaleli qembu elisokhemisi zincike esikhathini sezenzo nohlobo lokupakishwa. Intengo elinganiselwe emabhodleleni iqala kusuka kuma-ruble angama-500., Izindleko kuma-cartridge - kusuka kuma-ruble ayi-1000., Kumapeni wesirinji okungenani ama-ruble ayi-1500.
Ukuthola umthamo nesikhathi sokuthatha umuthi, udinga ukuxhumana nodokotela we-endocrinologist
Konke kuncike ezinhlobonhlobo
Izinhlobo zezimali nemiphumela emzimbeni zichazwe ngezansi.
Umuthi wenziwa kusetshenziswa ubuchwepheshe be-DNA esebenza kabusha, unesikhathi sokusebenza esilinganiselwe. Inhloso eyinhloko yesidakamizwa ukulawula i-glucose metabolism. Isiza ukuvimba inqubo yokuqhekeka kwamaprotheni futhi inomphumela we-anabolic kwezicubu zomzimba. I-Humulin NPH inyusa umsebenzi wama-enzymes akhuthaza ukwakheka kwe-glycogen kwezicubu zemisipha. Ikhuphula inani lama-acid amaningi, ithinta izinga le-glycerol, ithuthukisa ukukhiqizwa kwamaprotheni futhi ikhuthaza ukusetshenziswa kwama-aminocarboxylic acid amaseli emisipha.
Ama-Analogi anciphisa ushukela wegazi yilawa:
Ngemuva komjovo, isixazululo siqala ukusebenza ngemuva kwehora eli-1, umphumela ophelele utholakala kungakapheli amahora angama-2-8, into ihlala isebenza amahora angama-18-20. Isikhathi sokusebenza kwe-hormone sincike kumthamo osetshenzisiwe, indawo yomjovo, nomsebenzi womuntu.
I-Humulin NPH ikhonjiswa ukusetshenziswa ku:
Isifo sikashukela esine-insulin therapy.
Umuntu wokuqala owathola isifo sikashukela.
Abesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela esinganciphisi i-insulin.
Umyalo uthi lesi sidakamizwa asinqunyelwe abantu abane-hypoglycemia yamanje, ebonakala ngokuhla kweglucose yegazi ngaphansi kuka-3.5 mmol / l, egazini elisondeleneyo - 3.3 mmol / l, kwiziguli ezine-hypersensitivity ezingxenyeni ngazinye zomuthi.
Imiphumela emibi engahle yenzeke ngemuva kokusetshenziswa kwomuthi ijwayele ukubonakaliswa:
Okuhlelekile nokwendawo kwendawo.
Ngokuqondene ne-overdose yesidakamizwa, azikho izimpawu ezithile zokusebenzisa ngokweqile. Izimpawu eziphambili zibhekwa njengokuqala kwe-hypoglycemia. Isimo sihambisana nokulimala kwekhanda, i-tachycardia, ukujuluka ngokweqile nokushunqisa isikhumba. Ukugwema lezi zinkinga zempilo, udokotela ukhetha umthamo wesiguli ngasinye, ebheka izinga le-glycemia.
Ngokweqile komuthi, i-hypoglycemia kungenzeka.
I-Humulin M3, njengekhambi langaphambilini, ingumbhalo oqhubeka isikhathi eside. Kuyabonakala ngesimo sokumiswa kwezigaba ezimbili, ama-cartridge weglasi aqukethe i-insulin humulin ejwayelekile (30%) ne-humulin-nph (70%). Inhloso enkulu yeHumulin Mz ukulawula umthetho we-glucose metabolism.
Umuthi usiza ekwakheni izicubu zomzimba, ukhipha ngokushesha i-glucose nama-aminocarboxylic acid kumaseli womsipha nakwezinye izicubu ngaphandle kwengqondo. I-Humulin M3 isiza izicubu zesibindi ziguqule i-glucose ibe yi-glycogen, ivimbela i-gluconeogeneis futhi iguqule i-glucose eyeqile ibe ngamafutha e-subcutaneous ne-visceral.
Ukufana kwezidakamizwa yilezi:
Ngemuva komjovo, uHumulin M3 uqala ukusebenza ngemuva kwemizuzu engama-30-60, umphumela omkhulu utholakala kungakapheli amahora angama-2 kuya kwengama-12, isikhathi somsebenzi we-insulin amahora angama-24. Izici ezithinta izinga lomsebenzi weHumulin m3 zihambisana nendawo ekhethiwe yomjovo nomthamo, ngomsebenzi womzimba womuntu nokudla kwakhe.
Abantu abanesifo sikashukela abadinga ukwelashwa nge-insulin.
Abesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela sokukhulelwa.
Izisombululo ze-insulin ezingathathi hlangothi ziyafakelwa ku-hypoglycemia etholakele kanye ne-hypersensitivity kuzithako zokwakheka. Ukwelashwa kwe-insulin kufanele kwenziwe ngaphansi kokuqondisa kukadokotela, okuzosusa ukuthuthukiswa kanye nenkinga ye-hypoglycemia, engaba, esimweni esihle kakhulu, imbangela yokudangala nokulahlekelwa ukwazi, kokubi kakhulu - ukuqala kokufa.
Ngesikhathi sokwelashwa kwe-insulin, iziguli zingathola ukusabela komzimba kwendawo, okuvame ukubonakaliswa ukulunywa, ukudumba, noma ukuqubuka kwesikhumba endaweni yomjovo.Isimo sesikhumba senziwa ngokwejwayelekile ezinsukwini eziyi-1-2, ezimweni ezinzima kudingeka amasonto ambalwa. Kwesinye isikhathi lezi zimpawu ziwuphawu lomjovo ongalungile.
Isistimu yokungezwani komzimba yenzeka kancane kancane, kepha ukubonakaliswa kwayo kubucayi kakhulu kunokwedlule, njengokulunywa okujwayelekile, ukushoda komoya, umfutho ophansi wegazi, ukujuluka ngokweqile kanye nokushaya kwenhliziyo okusheshayo. Ezimweni ezithile, i-allergy ingaba yingozi enkulu empilweni yomuntu, isimo silungiswa ngonyango oluphuthumayo, ukusetshenziswa kwe-desensitization kanye nokufakwa esikhundleni sezidakamizwa.
Umuthi ubekelwe abantu abadinga ukwelashwa nge-insulin.
I-Humulin regula - isenzo esifushane
I-Humulin P ingumbumbano we-DNA ophindayo onesikhathi esifushane sokuvezwa. Injongo eyinhloko ukulawula i-glucose metabolism. Yonke imisebenzi enikezwe umuthi iyafana nomgomo wokuchayeka kwamanye ama-humulin. Isixazululo sikhonjiswa ukuthi sisetshenziswe ngabantu abanesifo sikashukela sohlobo lokuqala nesesibili, ngokumelana nomzimba kwezidakamizwa ze-hypoglycemic zomlomo kanye nokwelashwa okuhlanganisa.
I-Humulin regula inqunyelwe:
I-Ketoacidotic ne-hyperosmolar coma.
Uma isifo sikashukela sivele ngesikhathi sokuzala kwengane (kuncike ekwehlulekeni kokudla).
Nendlela yezikhathi ezithile yokwelapha isifo sikashukela esinegciwane.
Lapho ushintshela ku-insulin enwetshiwe.
Ngaphambi kokuhlinzwa, nokuphazamiseka kwe-metabolic.
I-Humulin P i-contraindication uma kwenzeka i-hypersensitivity izitho ngazinye zomuthi futhi yatholakala i-hypoglycemia. Udokotela mathupha unikeza isiguli umthamo kanye nohlobo lokulimala lubheka izinga le-glucose egazini ngaphambi kokudla nangemva kwamahora angu-1-2 ngemuva. Ngaphezu kwalokho, ekuhambeni komthamo, izinga likashukela kumchamo kanye nenkambo ethile yesifo kuyabhekwa.
Umuthi obhekwayo, ngokungafani nalawo owedlule, ungalawulwa ngokungemthetho, ngokungenasici nangokuzenzela. Indlela ejwayelekile kakhulu yokuphatha i-subcutaneous. Esikhundleni sikashukela esiyinkimbinkimbi nesifo sikashukela esinesifo sikashukela, ukuthandwa imijovo ye-IV neye-IM. Nge-monotherapy, umuthi uphathwa izikhathi ezingama-3-6 ngosuku. Ukuze ubeke eceleni ukwenzeka kwe-lipodystrophy, indawo yemijovo ishintshwa ngaso sonke isikhathi.
I-Humulin P, uma kunesidingo, ihlanganiswa nomuthi we-hormone wokuvezwa isikhathi eside. Izithonjana ezidumile zomuthi:
I-Insuman Rapid GT.
Umuthi ubekwa lapho ushintshela ku-insulin eyeluliwe
Intengo yalokhu kungena esikhundleni iqala kusuka kuma-ruble angama-185, iRosinsulin ibhekwa njengesidakamizwa esibiza kakhulu, intengo yaso namuhla ingaphezu kwama-ruble angama-900. Ukufakwa esikhundleni kwe-insulin nge-analogue kufanele kwenzeke ngokubamba iqhaza kukadokotela ohlanganyelayo. I-analogue eshibhile kakhulu yeHumulin R yi-Actrapid, ethandwa kakhulu yiNovoRapid Flekspen.
I-Humulinultralente esebenza isikhathi eside
I-insulin Humulin ultralente kungenye yezidakamizwa ezikhonjiswe ukusetshenziswa ezigulini ezinesifo sikashukela esincike ku-insulin. Umkhiqizo ususelwa kwi-DNA ephindaphindayo futhi ungumkhiqizo osebenza isikhathi eside. Ukumiswa kusebenze ngemuva kwamahora amathathu ngemuva komjovo, umphumela omkhulu utholakala kungakapheli amahora ayi-18. Imiyalo esetshenzisiwe ikhombisa ukuthi ubude besikhathi seHumulinultralente ngamahora angama-24-28.
Udokotela ubeka umthamo wemithi esigulini ngasinye ngamunye, kucatshangelwa isimo sesiguli. Umuthi uphathwa ngaphandle kokulungiswa, imijovo yenziwa ijule ngaphansi kwesikhumba izikhathi ezi-2 ngosuku. Lapho uHumulin Ultralente ehlanganiswa nenye i-hormone yokwenziwa, umjovo unikezwa ngokushesha. Isidingo se-insulin siyakhuphuka uma umuntu egula, ebhekene nengcindezi, ukuthatha izindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo, ama-glucocorticoids noma ama-hormone egilo.Futhi, kunalokho, iyancipha ngezifo zesibindi nezinso, ngenkathi uthatha ama -hibhu e-MAO nama-beta-blockers.
Ama-analoggues wezidakamizwa: uHumodar K25, uGensulin M30, i-Insuman Comb neFarmasulin.
Cabanga contraindication kanye nemiphumela emibi.
Njengawo wonke ama-humulin, i-insulin ultralente ifakwa emzimbeni uma kwenzeka i-hypoglycemia eqhubekayo nokushuba okuqinile ezingxenyeni ezithile zomkhiqizo. Ngokusho kochwepheshe, imiphumela emibi ayivezi njengendlela yokusabela komzimba. Umphumela onokwenzeka ngemuva kokuthi umjovo ubonakaliswe yi-lipodystrophy, lapho inani lezicubu ze-adipose ezicutshini ezi-subcutaneous lincipha, nokumelana ne-insulin.
Ezimweni ezingavamile, umuthi ubangela ukusabela komzimba.
I-analogue ethandwayo ye-humulin - Protaphane
I-Insulin Protafan NM ikhonjiswa kwisifo sikashukela sohlobo lokuqala nesesibili, ukungavikeleki kokutholwa kwe-sulfonylurea, kwezifo ezihlanganisa inkambo yesifo sikashukela, esikhathini sokuhlinzwa kanye nesokusebenza, kwabesifazane abakhulelwe.
I-Protafan ibekelwe isiguli ngasinye, sinaka izidingo zomzimba wayo. Ngokwemiyalo, isidingo sedosi yokufakelwa ye-hormone ngu-0.3 - 1 IU / kg / ngosuku.
Isidingo sanda ezigulini ezinokumelana ne-insulin (ukungasebenzi kahle kwe-metabolic yamaseli ku-insulin), kaningi lokhu kwenzeka neziguli ngesikhathi sokuthomba nakubantu abanokukhuluphala. Ukulungiswa kwethamo lomuthi kungenziwa ngudokotela oholayo uma isiguli sinesifo esijwayelekile, ikakhulukazi uma ngabe i-pathology ithelelekile. Umthamo ulungiswa ngezifo zesibindi, izinso nezifo ze-gland yegilo. I-Protafan NM isetshenziswa njengomjovo ongama-subcutaneous ku-monotherapy futhi uhlanganiswa nama-insulin amafushane noma asheshayo esenzo.
Izinhlobo nezinhlobo zokukhishwa kweHumulin
I-Insulin Humulin yi-hormone ephinda ngokuphelele i-insulin eyenziwe emzimbeni womuntu ngesakhiwo, indawo yama-amino acid kanye nesisindo samangqamuzana. Kuyaphindeka, okusho ukuthi, kwenziwa ngezindlela zobunjiniyela bezakhi zofuzo. Imithamo ebalwe kahle yalesi sidakamizwa ingabuyisela i-carbohydrate metabolism kubantu abanesifo sikashukela futhi igweme izinkinga.
Humulin Njalo - Lokhu kuyisixazululo se-insulin emsulwa, kubhekiswa ezidakamizweni ezisebenza ngokubambelela. Inhloso yawo ukusiza ushukela ovela egazini ukuthi ungene ezingqamuzaneni, lapho usetshenziswa ngumzimba ukuze uthole amandla. Ngokuvamile kusetshenziswa ngokuhlangana ne-insulin ephakathi noma yesikhathi eside. Ingahanjiswa yodwa uma isiguli esinesifo sikashukela sine-pump insulin efakiwe.
I-Humulin NPH - ukumiswa okwenziwe i-insulin yomuntu ne-protamine sulfate. Ngenxa yalokhu kwengezwa, umphumela wokwehlisa ushukela uqala kancane ukwedlula we-insulin emfushane, futhi uqhubeka isikhathi eside kakhulu. Ukuphatha okubili ngosuku kwanele ukwenza i-glycemia ibe phakathi kokudla. Imvamisa, iHumulin NPH inikezwa kanye ne-insulin emfushane, kepha ngohlobo 2 lwesifo sikashukela lungasetshenziswa ngokuzimela.
Humulin M3 Ingabe isidakamizwa se-biphasic equkethe i-insulin ejwayelekile engama-30% nama-70% NPH. Okuvamile okuthengiswayo yiHumulin M2, inesilinganiso esingu-20: 80. Ngenxa yokuthi ingxenye ye-hormone isethwe ngumenzi futhi ayizinaki izidingo zomuntu ngamunye zesiguli, ushukela wegazi awunakulawulwa nawo ngempumelelo njengoba lapho usebenzisa i-insulin emfushane naphakathi. I-Humulin M3 ingasetshenziswa ngabanesifo sikashukela, abancoma uhlobo lwendabuko lokwelashwa kwe-insulin.
Humulin Amahora wesenzo
isiqalo ubukhulu ukuphela
Njalo 0,5 1-3 5-7
I-M3 ne-M2 0,5 1-8,5 14-15
Zonke i-humulin ezikhiqizwa yiHumulin njengamanje zinokuqoqeka kwe-U100, ngakho-ke kufanelekile isirinji yesimanje ne-syringe pens.
Izilazi eziyisilazi eziyi-10 ml
ama-cartridgeges wesirinji amapeni, aqukethe ama-3 ml, kwiphakeji lezingcezu ezi-5.
I-Humulin insulin ilawulwa ngokungaziphathi kahle, ezimweni ezibucayi - intramuscularly. Ukuphathwa kwe-Intravenous kuvunyelwe kuphela kuHumulin njalo, kusetshenziselwa ukuqeda i-hyperglycemia enzima futhi kufanele kwenziwe kuphela ngaphansi kokuqashwa ngudokotela.
Ngokusho kwemiyalo, uHumulin angabekwa kuzo zonke iziguli ezine-insulin ezinzima. Imvamisa ibonwa kubantu abanohlobo loku-1 noma ngaphezulu kweminyaka emi-2 yesifo sikashukela. Ukwelashwa kwe-insulin okwesikhashana kungenzeka lapho uthwala ingane, ngoba izidakamizwa ezinciphisa ushukela zinqatshelwe ngalesi sikhathi.
IHumulin M3 inqunyelwe iziguli ezindala kuphela, okunzima kakhulu kuzo ukusetshenziswa kohlobo lokuqinisa i-insulin. Ngenxa yengozi eyandayo yezinkinga zesifo sikashukela ukuya eminyakeni eyi-18, uHumulin M3 akanconywa.
I-Hypoglycemia ngenxa yokudla ngokweqile kwe-insulin, engabalwa ngokomzimba, ukuswela i-carbohydrate ekudleni.
Izimpawu zokwaliwa yilesi sifo, njengokuqhuma, ukuvuvukala, ukulunywa, nokubomvu ngokuzungeza indawo yomjovo. Zingadalwa yizakhi zombili ze-insulin nezomuntu ezisizayo zomuthi. Uma i-allergy iqhubeka kungakapheli isonto, uHumulin kuzodingeka ukuthi afakelwe i-insulin enye indawo.
Ubuhlungu bemisipha noma ukushwabana, ukushaya kwenhliziyo okwandayo kungenzeka lapho isiguli sinokuntuleka okukhulu kwe-potassium. Izimpawu ziyanyamalala ngemuva kokuqeda ukuntuleka kwale macronutrient.
Shintsha ekuqineni kwesikhumba nezicubu ezingaphansi kwesakhi somjovo owenziwa njalo.
Ukumisa ukuphathwa kwe-insulin ejwayelekile kuyabulala, ngakho-ke, noma ngabe kwenzeka ukungaphatheki kahle, ukwelashwa kwe-insulin kufanele kuqhubeke kuze kuboniswane nodokotela wakho.
Iningi leziguli ezinqunywe iHumulin alitholi nhlobo imiphumela emibi ngaphandle kwe-hypoglycemia emnene.
I-Humulin - imiyalo esetshenzisiwe
Ukubalwa kwe-dose, ukulungiselela umjovo kanye nokuphathwa kwe-Humulin kuyafana namanye amalungiselelo we-insulin wesikhathi esifanayo sokwenza. Umehluko kuphela ngesikhathi ngaphambi kokudla. KuHumulin njalo kuyimizuzu engama-30. Kuyasiza ukulungiselela ukuzilawula kokuqala kwehomoni kusengaphambili, ngoba ufunde ngokucophelela imiyalo yokusebenzisa.
I-insulin kumele ikhishwe esiqandisini kusengaphambili ukuze amazinga okushisa esisombululo wabanjwa igumbi. I-cartridge noma ibhodlela lengxube ye-hormone ene-protamine (Humulin NPH, Humulin M3 ne-M2) idinga ukusulwa phakathi kwezintende kaningana yaphenduka yenyuka naphansi ukuze ukumiswa kwayo phansi kuncibilike ngokuphelele bese kuthi ukumiswa kutholakale umbala ofananayo oyi-milky ngaphandle kokungena ngaphakathi. Nyakazisa ngamandla ukuze ugweme ukufakwa okweqile kokumiswa nomoya. I-Humulin Okujwayelekile akudingi ukulungiswa okunjalo, kuhlala kubonakala sobala.
Ubude binaliti bukhethiwe ngendlela yokuqinisekisa ukuthi injekishini engasasebenzi futhi ingangeni emsipheni. Amapeni wesirinji alungele i-insulin Humulin - Humapen, BD-pen kanye nezimpawu zawo.
I-insulin ifakwa ezindaweni ezinamathishu athuthukile: isisu, amathanga, amabhlogo nezingalo ezingaphezulu. Ukufakwa okusheshayo nokufana ngokuphelele egazini kubonwa ngemijovo esiswini, ngakho iHumulin Regular iyakhonjwa lapho. Ukuze isenzo somuthi sihambisane nemiyalo, akunakwenzeka ukwandisa ngomshini ukujikeleza kwegazi endaweni yomjovo: hlikihla, ucishe, bese ucwilisa emanzini ashisayo.
Lapho wethula uHumulin, kubalulekile ukuthi ungagijimeli: ukuqoqa kancane isikhumba ngaphandle kokubamba izicubu, ushutheke kancane umuthi, bese ubamba inalithi esikhunjeni amasekhondi ambalwa ukuze isixazululo ungaqali ukuvuza. Ukunciphisa ubungozi be-lipodystrophy nokuvuvukala, izinaliti ziyaguqulwa ngemuva kokusetshenziswa ngakunye.
Umthamo wokuqala we-Humulin kufanele ukhethwe ngokuhlangana nodokotela ohambelayo. I-overdose ingaholela ekwehleni okunamandla koshukela kanye ne-hypoglycemic coma.Inani elinganele le-hormone ligcwele i-ketoacidosis yesifo sikashukela, ama-angiopathies ahlukahlukene ne-neuropathy.
Izinhlobo ezahlukahlukene ze-insulin zihlukile ekusebenzeni, ngakho-ke udinga ukushintshela kuHumulin uye kwesinye isidakamizwa kuphela uma kunemiphumela emibi noma isinxephezelo esanele sesifo sikashukela. Ukuguqulwa kudinga ukuguqulwa komthamo kanye nokunye okwengeziwe, ukulawulwa okujwayelekile kwe-glycemic.
Isidingo se-insulin singakhuphuka ngesikhathi sokushintshwa kwama-hormone emzimbeni, ngenkathi kuthathwa imishanguzo ethile, izifo ezithathelwanayo, ingcindezi. I-hormone engaphansi iyadingeka ezigulini ezine-hepatic futhi, ikakhulukazi, ukwehluleka kwezinso.
Imithetho yokugcina i-Humulin
Zonke izinhlobo ze-insulin zidinga izimo ezikhethekile zokugcina. Izici zehormoni zishintsha kakhulu ngesikhathi kubanda, kuvezwa ngemisebe ye-ultraviolet kanye namazinga okushisa angaphezu kuka-35 ° C. Isitoko sigcinwa esiqandisini, emnyango noma eshalofini elikude nodonga lwangemuva. Impilo yeshelufu ngokwemiyalo esetshenziswayo: iminyaka emi-3 yeHumulin NPH ne-M3, iminyaka emi-2 yeRegular. Ibhodlela elivulekile lingaba emazingeni okushisa ayi-15-25 ° C izinsuku ezingama-28.
Umphumela wezidakamizwa ku-humulin
Imithi ingashintsha imiphumela ye-insulin futhi ikhulise nengozi yemiphumela emibi. Ngakho-ke, lapho kunquma i-hormone, udokotela kumele ahlinzeke ngohlu oluphelele lwemithi ethathiwe, kufaka phakathi amakhambi, amavithamini, izithasiselo zokudla, izithasiselo zezemidlalo nezindlela zokuvimbela inzalo.
Imiphumela engaba khona:
Umphumela emzimbeni Uhlu lwezidakamizwa
Ukwanda ushukela, ukwanda komthamo we-insulin kuyadingeka. Ukuvimbela inzalo ngomlomo, ama-glucocorticoids, ama-androgens okwenziwa, ama-hormone we-thyroid, ama-agonists akhethiwe we-β2-adrenergic, kufaka phakathi i-terbutaline ejwayelekile ne-salbutamol. Izindlela zokwelapha isifo sofuba, i-nicotinic acid, amalungiselelo we-lithium. I-Thiazide diuretics esetshenziselwa ukwelapha umfutho wegazi ophakeme.
Ukwehliswa ushukela. Ukugwema i-hypoglycemia, umthamo we-Humulin kuzofanela uncishiswe. Ama-Tetracyclines, ama-salicylates, ama-sulfonamides, ama-anabolics, ama-beta-blockers, ama-hypoglycemic agents ukwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2. Ama-inhibitors e-ACE (anjenge-enalapril) ne-AT1 receptor blockers (losartan) avame ukusetshenziswa ukwelapha umfutho wegazi ophakeme.
Imiphumela engalindeleki kushukela wegazi. I-Alcohol, i-pentacarinate, i-clonidine.
Ukunciphisa izimpawu ze-hypoglycemia, yingakho kunzima ukuyiqeda ngesikhathi. Ama-blocker e-beta, ngokwesibonelo, i-metoprolol, i-propranolol, amaconsi wamehlo athile ekwelapheni i-glaucoma.
Izici zokusebenzisa ngesikhathi sokukhulelwa
Ukuze ugweme ukwelashwa kwe-fetopathy ngesikhathi sokukhulelwa, kubalulekile ukuyigcina njalo i-glycemia ejwayelekile. Izidakamizwa ze-Hypoglycemic zenqatshiwe ngalesi sikhathi, ngoba ziphazamisa ukulethwa kokudla enganeni. Okuwukuphela kwekhambi elivunyelwe ngalesi sikhathi yi-insulin ende futhi emfushane, kufaka neHumulin NPH neRegular. Ukwethulwa kweHumulin M3 akuyona into efiselekayo, ngoba ayikwazi ukunxephezela kahle isifo sikashukela mellitus.
Ngesikhathi sokukhulelwa, isidingo se-hormone sishintsha kaningana: siyancipha ku-trimester yokuqala, sikhuphuka kakhulu ku-2 no-3, futhi sehla kakhulu ngokushesha ngemuva kokubeletha. Ngakho-ke, bonke odokotela abaqhuba ukukhulelwa nokubeletha kufanele baziswe ngokuba khona kwesifo sikashukela kwabesifazane.
I-Insulin Humulin ingasetjenziswa ngaphandle kwemikhawulo ngesikhathi sokuncelisa ibele, ngombana akungene ebisini futhi ayithinti ushukela weengazi.
Yini engathatha isikhundla seHululin insulin uma kwenzeka imiphumela emibi:
Izidakamizwa Intengo ye-1 ml, rub. I-analogue Intengo ye-1 ml, rub.
ibhodlela ipipi cartridge ibhodlela ibhokisi
I-Humulin NPH 17 23 Biosulin N 53 73
I-Insuman Bazal GT 66 —
I-Rinsulin NPH 44 103
I-Protafan NM 41 60
Humulin Njalo 17 24 I-Actrapid NM 39 53
I-Rinsulin P 44 89
I-Insuman Rapid GT 63 —
Humulin M3 17 23 IMikstard 30 nm Okwamanje ayitholakali
Leli thebula libala kuphela ama-analogues aphelele - ukufakwa kofuzo kokufakwa komuntu ngofuzo nesikhathi esiseduze sokwenza.
Umuthi "Humulin M3" ubekelwe iziguli ezinesifo sikashukela ezidinga ukwelashwa kwe-insulin, kanye nesifo sikashukela sokukhulelwa, esenzeka kwabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa. Umuthi usiza ukuguqula ushukela ube yi-glycogen futhi uguqule ushukela ube amafutha, ngaleyo ndlela unciphise ubungozi be-gluconeogeneis. Ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo wezemithi, udinga ukubonana nodokotela ozokubala umthamo bese wenza isheduli lokuqokwa.
Kungenzeka yini kubantu besifazane abakhulelwe nababambayo?
Ukufundiswa kwesidakamizwa kuvumela ukusetshenziswa kokumiswa kokulungiswa kwe-glucose yesifo sikashukela somzimba ngesikhathi sokukhulelwa. Nikeza ikhambi kanye nomthamo kufanele ube udokotela. Umuthi lo uzosiza ekunciphiseni ubungozi bokwakha i-pathologies yezitho zangaphakathi zombungu futhi kuzosiza umama ukuthi adlulise kalula isikhathi sokukhulelwa. Akukho ukuvinjelwa kokuthatha ngesikhathi sokubeletha. Ukuze kube lula ukusetshenziswa kwe-insulin, ipeni lesirinji elinama-cartridgege aqukethe isixazululo esilungele ukuphatha kunconywa omama abakhulelwe.
Umuthi uvunyelwe ukusetshenziswa ngabantu abanomkhuba we-hypoglycemia. I-100 IU ye-insulin yomuntu ephindaphindayo nge-1 ml yomkhiqizo wemithi, okuthi, ngesilinganiso esifanele kanye nomthamo, akubangeli ukusabela okungekuhle, ngaphandle kokusabela komzimba ngamunye kwizakhi zomuthi. Uma umzimba wenqaba umuthi, kuvela imiphumela emibi elandelayo:
Umphumela wecala lomuthi kungaba ukubukeka kwe-eczema esikhunjeni.
Isikhumba eczema, ukulunywa, ubomvu be-epidermis,
Isikhathi semiphumela emibi ingahluka. Ukuqeda ukungaphatheki kahle kusuka ku-hypoglycemia ethambile, kunconywa ukuthatha umthamo omncane kashukela. Lapho umuthi uhlanganiswa ne-insulin esebenza isikhathi eside, imiphumela emibi yesidakamizwa ngokweqile yenzeka kancane kancane futhi kungenzeka ngemuva kwamahora ama-2-3. Ukulandela amazinga e-glucose futhi ungawudli ngoshukela, kufanele usebenzise i-glucometer ukuqapha isimo sezempilo sikashukela.
Umuthi uthengwa kuphela ngencwadi egunyaziwe. Ama-cartridge noma ama-ampoule anconywa ukuthi agcinwe endaweni epholile emnyama. isiqandisi kufanelekile uma izinga lokushisa elikulo ligcinwa ngaphakathi kwama-2-8 degrees. Isixazululo akufanele senziwe iqhwa. Ukumiswa okuyi-crystallised akulungele ukusetshenziswa. I-can can evulekile yemali ivunyelwe ukusetshenziselwa izinsuku ezingama-28, ilonga ngaphandle kokuthola ukukhanya emazingeni okushisa angama-15 kuye kwangama-26. Umyalo uncoma ukugcina umkhiqizo ungafinyeleleki ezinganeni nasezilwaneni.
Ezimweni zokumelana noma ukusabela kwe-allergen, umuthi unconyelwa ukuthi ushintshwe nge-analog. Ukumiswa kwemithi okusekelwe ekuphindisweni kwe-insulin yabantu kufanelekile. Faka esikhundleni salowo muthi nge-analogue yengulube yehomoni. Ezidakamizweni ezifanayo, kusetshenziswa i-Insuman Bazal, Mikstard 30 NM, Rinsulin NPH nezinye izidakamizwa zesifo sikashukela eziqukethe i-insulin-isophan (INN). Umthamo nokuhambelana kufanele kunqunywe futhi kuhlolwe udokotela. Ukuzelapha ngokwakho akwamukeleki.
Ayikwazi ukusetshenziswa nini?
Kukhona imibiko embalwa yokusetshenziswa kweHumulin. Lokhu kufaka: i-hypoglycemia, elungiselelwe ngaphambi kokuthatha umuthi, kanye nokuzwela komuntu ngamunye kwizakhi. Umphumela omubi ophambili yi-hypoglycemia, engadala ukufenda futhi iholele ekufeni, kepha umphumela onjalo onqabile uyivelakancane.
Imiphumela evamile yokungezwani komzimba:
Kwesinye isikhathi ukubonakala komzimba wasendaweni kungenzeka, njenge-hyperemia, edema. Uma kwenzeka kweqisa ngokweqile, ukusabela komzimba okulandelayo kwenzeka:
isiyezi kanye nekhanda
I-Hypoglycemia kumele ihlolwe ngokucophelela, ngoba ezimweni ezithile izimpawu zingashintsha. Ukuqeda i-pathology emnene, ungathatha umthamo omncane weglucose. Okulandelayo, uzodinga ukulungisa indlela odla ngayo nokudla, kanye nomsebenzi womzimba. Ngezinga eliphakathi le-hypoglycemia, i-glucagon ihanjiswa ngendlela yomjovo kanye nokudla ngomlomo ama-carbohydrate kwenziwa. Uhlobo olunzima lwalesi sifo lungabonakala ngokukhohlisa, ukuquleka, ukuphazamiseka kohlelo lwezinzwa.
Ungasisebenzisa kanjani isidakamizwa?
Umthamo we-Humulin kufanele ukhethwe ngokuqinile ngamunye. Umuthi awukwazi ukuphathwa ngokuhlinzwa. Indlela ejwayelekile yokufakelwa ingaphansi kwesikhumba, kwesinye isikhathi i-intramuscularly. Ngokuphathwa kokufakelwa, indawo yezinkalo, namabhulukwe, ihlombe nesisu kufanelekile. Kungakapheli inyanga, endaweni eyodwa awukwazi ukwenza umjovo ongaphezu koku-1. Njengoba amakhono athile edingeka ekujovweni okufihlekile komuthi, kungcono ukunikela le nqubo kubasebenzi bezokwelapha ekuqaleni. Lapho usebenzisa umuthi, kubalulekile ukuthi ungangeni emthanjeni futhi ungawuthinti indawo yomjovo.
Ngaphambi kokusetshenziswa, ama-cartridge kanye nezimbiza kufanele kudingidwe izikhathi eziyi-10 ezintendeni zezandla zakho futhi kugxunyekwe kuze kube yilapho ukumiswa kuthola umthunzi we-matte noma umbala oseduze nobisi. Akunakwenzeka ukushushuluza kakhulu okuqukethwe yilezi zivalo, ngoba igwebu eliphumelelayo lizokwenza kube nzima ukuthola kahle umthamo. Lapho ulungiselela i-insulin ngomjovo, kudingeka uhlole ngokucophelela okuqukethwe i-ampoule. Uma izigaxa, i-white precipitate, iphethini ezindongeni ezinjengefrosty ibonakala kuso, isidakamizwa esinjalo asikwazi ukusetshenziswa.
Ngomjovo, kuyadingeka ukuthatha isirinji yevolumu elihambisana nomthamo odingekayo. Ngemuva kwenqubo, kunconywa ukubhubhisa inaliti futhi uvale isibambo usebenzisa i-cap. Lokhu kuyadingeka ukuze kugcinwe ukungazinzi komuthi, ukuvikela ukugqokwa kwezingxenye zakwamanye amazwe nomoya ungene ku-vial. Musa ukusebenzisa inaliti noma ulayishe okwesibili. Gcina umuthi endaweni epholile emnyama. Ngemuva kokuqala kokusetshenziswa, ibhodlela lingagcinwa isikhathi esingaphansi kwenyanga.
Ngokwazisa kweHumulin NPH, ezinye izici zokusetshenziswa kwayo kufanele zibhekwe:
ukuncika kwe-insulin esigulini kuyehla uma izinso, i-adrenal, i-pituitary, i-thyroid, isibindi, umsebenzi
ngaphansi kwengcindezi, isiguli sidinga i-insulin ethe xaxa,
Ukulungiswa komthamo kuyadingeka lapho uguqula indlela odla ngayo noma ngesikhathi sokuvivinya umzimba,
ukungezwani okwenzeka esigulini kungahle kungahlobene nokusetshenziswa kwe-insulin,
ngesinye isikhathi ukwethulwa kwalo muthi kungadinga ukunakekelwa okuphuthumayo kwezokwelapha.
Ngenxa yengozi yokuthola i-hypoglycemia ngemuva komjovo, umuntu kufanele enqabe ukushayela izimoto nemishini yokusebenza.
Ukusebenza komuthi kuyancipha uma uthatha inzalo yokuvimbela inzalo ngomlomo, ama-hormone egilo, ama-antidepressants, ama-diuretics, ama-glucocorticoids ngokufana. Umphumela wesidakamizwa uyathuthuka uma uphuza kanyekanye nawo:
I-Clonidine ne-reserpine kungadala izimpawu ze-hypoglycemia.
Analogs kanye namanani
Intengo ephakathi nepakethe ngalinye leHumulin NPH liyahluka phakathi kwama-ruble ayi-1000. Uma ungekho umuthi kumakhemisi, ungasebenzisa enye yezimpawu zawo. Lokhu:
Isimo esiphuthumayo se-Insulin-Ferein. Ine-insulin yokwenziwa komuntu.Umuthi uyatholakala ngesimo sesisombululo somjovo ongaphansi komhlaba.
IMonotard NM. Umuthi ungowokweqembu le-insulin elinesikhathi sokusebenza esijwayelekile, uyatholakala ngesimo sokumiswa kuka-10 ml ebhodleleni.
I-Humodar B. Iqukethe i-insulin yabantu, etholakala naku-100 IU ku-1 ml.
I-Pensulin SS ingenye i-analogue ehlelekile yesikhathi esiphakathi.
Phakathi kokufakwa esikhundleni kweHumulin NPH kukhona:
Humulin M3. Lokhu ukumiswa kwezigaba ezimbili okuqukethe i-insulin enganyibiliki yabantu kanye nokumiswa kwe-isofan insulin ngokwesilinganiso esingu-30: 70, ngokulandelana. Umuthi ubhekwa njengomuthi wesikhathi esijwayelekile, uqala ukusebenza kungakapheli isigamu sehora ngemuva kokuphatha, isikhathi sesikhathi somphumela sifinyelela emahoreni angama-15. Umuthi uphathwa nge-intramuscularly noma ngokweqile. Ngaphandle kwalokho, izinkomba kanye nokuphikisana kuhlangana ngokuphelele neHumulin NPH, ukuthatha lezi zidakamizwa ezimbili kungahlanganiswa nomjovo.
Humulin Njalo. NjengeHumulin NPH, iqukethe i-insulin esekwe kabusha kwi-DNA. Kodwa-ke, lo muthi ubhekisela emithini ye-insulin esebenza ngokushesha, ngenxa yalokho, ingahlanganiswa neHumulin NPH.
I-Vozulim N. Ine-insulin-isophan yomuntu futhi isho izidakamizwa zesikhathi esiphakathi. Kwenziwa ngokuqapha ezigulini ezinokukhubazeka kokujikeleza kwengqondo ebuchosheni. Ezinye izincomo zokusetshenziswa zisebenzisana nomuthi wokuqala.
IGensulin M. Inengxube yama-insulin wesikhathi esiphakathi nesimfishane. Umuthi lo uphathwa ngokuqakatheka bese uqala ukusebenza kungakapheli isigamu sehora.
I-pharmacology yesimanje isilungele ukunikela ngamakhetho amakhulu wokulungiselela i-insulin kwabanesifo sikashukela. Kodwa-ke, ngenxa yomehluko ekwakhiweni nasenkambisweni yesikhathi, uchwepheshe ofanelekayo kuphela okufanele akhethe i-analogue yomuthi obekiwe, anqume umthamo ngqo.
Iziguli eziningi zisabela kahle kumalungiselelo amaningi e-insulin. Ikakhulu, i-Humulin NPH ayibangeli ukusabela okungekuhle, yize imiyalo yokusebenzisa ixwayisa ngabo. I-insulin evela kumuthi imunca kahle uma umthamo ubalwe kahle futhi umjovo wenziwe kahle. Okuwukuphela komthelela emiphumeleni emibi kungaba ukunqunyelwa ngudokotela okungelona iqiniso noma ukujova okungalungile ngumhlengikazi noma isiguli uqobo. Ukuze ugweme lokhu, udinga ukusondela ngokucophelela kwinqubo yokuphatha umuthi. Ukuphela kwendlela yokugwema ukweqisa kanye nemiphumela emibi.
I-Humulin NPH ilungiselelo le-insulin eqenjini lemithi yokwelulwa okuphakathi. Udokotela kuphela ophatha isiguli onesifo sikashukela okufanele anikeze umuthi. Lesi silinganiso sizosiza ukugwema ukweqisa, ukukhetha okungalungile kwe-analogue nokubalwa kwevolumu edingwa yisiguli. Udokotela uyakwazi futhi ukubheka izimo ezikhethekile zokusetshenziswa kanye ne-contraindication esigulini, okuzogwema ukungahambi kahle komuthi.
Ungakuqonda futhi uvikele kanjani ukwehla koshukela egazini: Izimpawu nezindlela zokulungisa
I-Prunes yesifo sikashukela
Satellite glucometer service service
Ngabe yini isifo seswekile esinxephezelwe? Izindlela zokuhlola
Itiye leMonather likashukela: ukubuyekezwa kwabanesifo sikashukela
Amaqabunga e-walnut anezakhi ezinoshukela ezinoshukela
Imiyalo yokusetshenziswa "Rosinsulin S", izinkomba, contraindication, ukwakheka, ifomu lokukhipha, imiphumela emibi, ukufana kwezimpawu, ukubuyekezwa kanye nentengo
Imiyalo yendlela yokujolela isiguli lapho usebenzisa i-insulin ezimpandeni (kufakwe kuso iphakethe eneziphuzo ezi-5 no-10) Uma isiguli sisebenzisa uhlobo olulodwa lwe-insulin kuphela: 1. Yonakalisa umuthi wokuqothula irabha we-vial. 2. ...
I-CardioActive: imiyalo yokusebenzisa, izinkomba, intengo
Ubuhlungu besisu kwisifo sikashukela: ukugabha kanye nenausea, ukwelashwa kwezinkinga
Izindlela zokuthola ushukela wegazi ekhaya - nge-glucometer nangaphandle kwayo